အခန်းဆက်ဝတ္တုရှည် | လဂွန်းအိန်
Posted by lagoonaing under အခန်းဆက်ဝတ္တုရှည် | Tags: အခန်းဆက်ဝတ္တုရှည် |
သမိုင်းထဲမှာတစ်ကယ် ရှိခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းလဂွန်းအိန် အကြောင်းရေးသားတင်ပြချင်ပါတယ်။ဒီစိတ်ကူးရတော့ နည်းနည်းတော့ အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။ စာတွေပြန်ဖတ်၊ ရေးမယ့် ပုံစံတွေ စဉ်းစားနဲ့ပေါ့ဗျာ။နောက်အချိန်ကလဲတော်တော်ပေးရမယ်ထင်တာပါပဲ။
ကျွန်တော် ဒီစာတွေကို ရေးနိုင်ဖို့ စာအုပ်ထူထူ ကြီး အနည်းဆုံး ၃ အုပ်တော့ ပြန်ဖတ်ရပါလိမ့်မယ်။အိပ်ရေးတော့ပျက်တာပေါ့ဗျာ။
ဒါပေမယ့်ဖတ်တဲ့လူရှိရင် ရေးတဲ့လူလဲကျေနပ်ပါတယ်။ကျွန်တော် စာရေးတာ မရှင်းတာရှိခဲ့ရင်၊ သိချင်တာရှိခဲ့ရင် မေးကြပါ။
သိရင်ဖြေပါ့မယ်။မသိရင်လဲ မသိတဲ့အကြောင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ၀န်ခံပါ့မယ်။ လူတစ်ချို့လို မသိတာ၊မတတ်တာကို သိချင်တတ်ချင်ယောင်ဆောင်မနေပါ။ဒီစကားက ဘယ်သူ့ကိုမှ မရည်ရွယ်ပါဘူး။တိုက်ဆိုင်လို့ထိခိုက်သွားရင်တောင်းပန်ပါတယ်။
ဒါကတော့ အညွှန်းတွေပါ။ စာဖတ်ရင်းတွေ့လာကြပါလိမ့်မယ်။
နာမည်(သို့)အခေါ်အဝေါ်မူကွဲ = (/…)
မွန်ဘာသာနဲ့အသံထွက်ဆိုရင် = (…*)
မြန်မာရာဇ၀င်တွင် အင်းဝ-ဟံသာဝတီ အနှစ် ၄၀ စစ်မှာ ထင်ရှားသည့် ကာလ၊သမိုင်းအကွေ့တစ်နေရာ ဖြစ်သည်။ ထိုကာလ
တွင်းတွင် အထက် အင်းဝ(မြန်မာ)နှင့် အောက်ပဲခူး(မွန်)တို့ အပြိုင်စစ်ပြုခဲ့ပြီး၊သူရဲကောင်း ၊ပညာရှိ များ အများအပြားပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီး၊
ယဉ်ကျေးမှုအရလဲ ပဲ ရောနှော၊ပူးပေါင်းခဲ့ကြပါသည်။
သက္ကရာဇ်၇၄၅-၇၂၈) အား သုရှင်ဧ။် အမတော် မဟာဒေ၀ီ နှင့်ယောက်ဖတော် သမိန်မရူးတို့ မှ သတ်ဖြတ်ကာသမိန်မရူးထီးနန်း
ရရန်ကြံလေသောကြောင့် ဗညားနွဲ့ လဲ ကျွန်ယုံ ၃၀ ကျော်ဖြင့် ဒဂုံ (ရန်ကုန်)သို့ထွက်ပြေးကာ ထိုမှနေပြီး ပုန်ကန်ပါတော့သည်။ (သမိန်မရူး နှင့် မဟာဒေ၀ီ တို့မှာ မရိုးသားကြပေ။)နောင်တွင် မဟာဒေ၀ီနှင့် သမိန်မရူးတို့ က စစ်တပ်ကြီးစီရင်ကာ ဒဂုံကို ၀ိုင်းရံ
လာစဉ် ဥပါယ်ဖြင့် မြောင်းမြ နှင့် မုတ္တမ တို့မှ စစ်တပ်များကို ပြန်လှည့် စေရန် ပြုပြီး သမိန်မရူး တပ်ကိုည အချိန်တွင် အပြင်းတိုက်
သဖြင့် မရူးပြေးရာ လူသူသုံ့ပန်း အများအပြားရပြီး အောင်ပွဲခံနိုင်လေသည်။ နောက် တွင်ပဲခူးထိချီတက်တိုက်ခိုက်ရာ ပဲခူးမရောက်
မှီ ခမည်းတော် ဗညားဦး နတ်ရွာလားလေသောကြောင့် တစ်ကြောင်း၊ သမိန်မရူးပြေးသောကြောင့်တစ်ကြောင်း၊မြို့တွင်းမှ မှုးမတ်
ဒေါဗညားများက ထောက်ခံသောကြောင့်တစ်ကြောင်း နန်း ပလ္လင်ပေါ်သို့လွယ်ကူစွာ တက်နိုင်ကာ ရာဇာဓိရာဇ် ဟူသောဘွဲ့ဖြင့် အသက် ၁၆ နှစ်တွင် ဟံသာဝတီပြည်ကို အုပ်စိုးလေသည်။နန်းတက်ပြီးနောက် မကြာမှီ အင်းဝမှမင်းကြီးစွာ သည် မြောင်းမြစား လောက်ဖြား၏
မနာလို ကုန်းတိုက်စကားတွင်ယုံမှတ်ကာ ဟံသာဝတီ ကိုအရယူရန်အကြံဖြင့်ချီလာသည်ကို တွန်းလှန် ခဲ့ရသေးသည်။အမှန်တွင်
ဟံသာဝတီမင်းနေပြည်၏ အာဏာစက်မှာ ရာမည မွန်သုံးရပ်တွင်အရှေ့မုတ္တမ ၃၂ မြို့ နှင့် အနောက် ပုသိမ်၃၂မြို့ များသို့ပင် သက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲဖြစ်နေသည်မှာ ဆင်ဖြူရှင်ဗညားဦး လက်ထက်ကပင်ဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်ဗညားနွဲ့ အနေဖြင့် အဆိုပါ
သူပုန်သူကန်၊ မြို့စားရွာစားများကို နှိမ်နှင်းရန် အကြောင်းဖန်လာ လေတော့သည်။
ကျုပ်နာမည်က မသံလုံ(မဲ့စံလုံ/မွန်ဘာသာဖြင့်အသံထွက်*)၊မိဘများကတော့ သာမန် လယ်လုပ်အသည်သားတွေပါပဲ။ ကျုပ်ကျမှ တိုက်တာခိုက်တာ ၀ါသနာထုံလို့ ရွာက ဆရာတော်ရဲ့ ကပ္ပိယကြီးဆီမှာတိုက်နည်း ခိုက်ရာတွေကို သင်ကြားခဲ့တာအရွယ်
ရောက်သည်ထိပဲဆိုပါတော့။နောက်တော့ သုရှင်ရာဇာဓိရာဇ်ရဲ့ တပ်တော်ကြီး အရှေ့ဖက်မုတ္တမ နယ်တစ်လွှားကို နှိမ်နှင်းလာတယ်
်ကြားလို့ပဲအနီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ တရည်း ကိုသွားပြီး မြို့စား အမတ်ကြီးသမိန်သံဗြတ်ဆီမှာ အမှုတော်ထမ်းလိုက်ပါတယ်။အမတ်ကြီးက ဥာဏ် အမျှော်အမြင်ကြီးသလို၊စစ်ရေးစစ်ရာမှာလဲ မညံ့လှပါဘူး။ပြောရရင် သုရှင်ရာဇာဓိရာဇ် ရဲ့လက်ရုံးတစ်အားပတ္တမြားအစွယ်
တစ်ချောင်းလိုပါပဲ။သုရှင် ရာဇာဓိရာဇ် ဆိုတာကလဲ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဘုန်းရှင်ကံရှင်ဖြစ်တာမို့ အင်မတန် ထက်မြက်လှပေမယ့်၊
သုရှင်ရဲ့ခမည်းတော် ဗညားဦး လက်ထက်တော်ကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့ မြို့စားရွာစားများရဲ့ မလေးမခန့်တဲ့ပုန်ကန်မှုတွေ၊ မနာခံမှုတွေကို
လိုက်လံသုတ်သင်ရှင်းလင်းနေရတာပေါ့ဗျာ။ဒီလို သူပုန်သူကန်တွေကိုမရှင်းလင်းမှီကပဲ အနောက်ဖက်နယ်ဖြစ်တဲ့ မြောင်းမြမြို့က လောက်ဖြားရဲ့ သွေးထိုးမှုကြောင့်အထက် အ၀(အင်းဝ) ပြည်ကြီးက ရှင်ဘုရင် မင်းကြီးစွာ စစ်ပြုလာတာကို တွန်းလှန်ခဲ့ပြီးပြီမဟုတ်
လား။ နောက်အရှေ့ဖက်က ရန်စစ်တွေကို အရင်ရှင်းလင်းမယ်ဆိုပြီး ချီတက်လာတာတဲ့လေ။အစ က ဒီ တရည်းမြို့ဟာလဲ
ပုန်စားသူ ဘော်လဂွန်း (လောက်ဖြားနဲ့ တူတော်သူ) ကအခိုင်အမာ နေခဲ့တာပါ။နောက်သုရှင်စစ်ချီလာတယ်ကြားတော့ မခံဝံ့တော့ပဲ သူ့ဦးရီးဗြက်ထဗ ရှိရာ မုတ္တမ ကိုရှောင်တိမ်းသွားပါတယ်။ဒီတော့ သုရှင်လဲ ယုံကြည်ရတဲ့ အမတ်ကြီး သံဗြတ်ကို တရည်းမြို့မှာ
အင်အား၅၀၀၀နဲ့ ခန့်ထားပြီး နောက်ပြန်လှည့်လို့ ရိက္ခာ စုဖို့သွားပါတယ်။( လောက်ဖြားတို့ ညီအစ် ၄ ယောက်လုံးပုန်ကန်ကြ
ကြောင့်ပုန်ကန်ကြခြင်းဖြစ်သည်။)သုရှင်စစ် ပြန်ရုတ်တယ်ကြားတော့မုတ္တမ နဲ့ မော်လမြိုင် ကသူပုန်တွေဟာအင်ကြီးအားကြီးနဲ့
ချီတက်လို့ ကျုပ်တို့စောင့်တဲ့တရည်းမြို့ကို တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။ ကျုပ်က လဲ လက်ရေးထက်တဲ့လူပီပီ လာတဲ့ရန်သူစစ်မှန်
သမျှကို ဦးဆောင်တွန်းလှန် နိုင်လို့ ကျုပ်တို့တပ်မှာ ကျုပ်ဟာ နာမည် ကျော်လာပါတော့တယ်။ နောက် အမတ်ကြီး သမိန်သံဗြတ် က ကျုပ်ကောင်းကြောင်းတွေ ကိုသုရှင်စီ လျှောက်တင်ပေးလို့လားမသိဘူး။ ကျုပ်ကို သုရှင်က အဝေးနေဆုလာဘ်တော်တွေ ချီးမြှင့်
ပေးတယ်လေ။ ဒါပေမယ့် ကျုပ်လို ချင်တာဒီဆုလာဘ်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျုပ်က ကျွန်ဖြစ်တဲ့လူပါ။ ကျုပ် အရှင်သခင်ဆီမှာ ကျွန်ကောင်းအဖြစ်နဲ့ အစွမ်းကုန် တာဝန်တွေ ထမ်းဆောင် ရဖို့ပဲ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ ကျုပ်အတွက် ပွဲကြီးပွဲကောင်း အစွမ်းပြခွင့်ရတော့မယ်ထင်ပါတယ်။ အမတ်ကြီး သံဗြတ် က လဂွန်းဗျည်း မှာရှိတဲ့ သုရှင်တပ် ကိုသွားကူညီ မယ်ဆိုပြီး ကျုပ်တို့ကို ခေါ်ဆောင်သွားလို့ပါ။ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ဟို ရောက်တော့ ကျုပ်တို့တပ်ကိုရှေ့တန်း
မှာထားလို့ တိုက်ခိုင်းပါတယ်လေ။ သုရှင်ဟာ စစ်ရေးစီရင်ရာမှာ ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတာ ကျုပ်မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ခွင့်ရတော့
တာပဲပေါ့။စစ်ကို မပြုမီ တိုက်ရမယ့် မြို့ ကိုအရင်ဦးဆုံး ပတ်ကြည့်တော့ ကျုံးနဲ့ အနီးတစ်နေရာမှာ တဲအိမ်တစ်လုံးတွေ့တာနဲ့ ညနေစောင်းအရောက်၊ လေဝှေ့ချိန် မှာ အဲဒီတဲကို မီးတိုက်ခိုင်းပါတယ်။ မီးကနေ မီးစမီးပွားလေးတွေ ဟာ မြို့ထဲကို လေနဲ့ပါပြီး မြို့တွင်းမှာပါမီးလောင်ပါတော့တယ်။ ဒီတော့ မြို့တွင်းမှာ ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်ပြီး မြို့မှာစောင့်တဲ့ ပုန်ကန်သူ ဘောလဂွန်း ဟာမြို့ပြင်ကို ဆင်နဲ့ထွက်လို့ မီးငြိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ အကြံနဲ့လာပါတော့တယ်။ မြို့တံခါးအဖွင့်မှာပဲ ကျုပ်တို့တပ်တွေ အပြင်းဝင်တိုက်လို့ ရန်သူဗိုလ် လဲကျ၊မြို့ကိုလဲရပါတော့တယ်။ကျုပ်ရဲ့ အစွမ်းတွေ ကိုသုရှင်မျက်မြင် မြင်တဲ့နောက်မှာတော့ အနား ခစားစေတော့တယ်လေ။
ကျုပ်တို့လဲ ညရောက်တော့ အောင်ပွဲခံတဲ့အနေနဲ့ မြို့တွင်းမှာ စားသောက်နေကြတုန်း မြို့ပြင်က အသံတွေကြားလို့မှ မြို့ရိုးပေါ်တက်ကြည့်ကြတော့ သံမောင်မြို့စား မဂြိုင်း ဟာ သစ္စာ ကိုမစောင့်ပဲ သူ့တပ်တွေနဲ့ မြို့ပြင်က ကျုပ်တို့တပ်တွေကို အတင်းတိုက်ပြီး၊တပ်တိုင်တွေ တဲနဲ့ ရိက္ခာတွေကို မီးတင်ရှို့နေတာတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။မဂြိုင်း ဟာ သုရှင်ရဲ့ခြေမသွေးကို သောက်ပြီးသစ္စာခံခဲ့ပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် မရိုးသားတဲ့အကြံရှိနှင့်ပြီးသားမို့ ကျုပ်တို့စစ်ပန်းတဲ့အချိန်၊ အမှုမှတ်နေတဲ့အချိန် မှာ ၀င်တိုက်တာပဲဖြစ်ရမယ်။
“တော်.. ဒီကျွန်ပျက် မဂြိုင်းရဲ့ ခေါင်းကို ငါ့အားမည်သူဆက်မည်နည်း .. “……..
သုရှင်ရာဇာဓိရာဇ်ရဲ့အသံက တင်းမာ ခက်ထန်နေသည်။တိုက်သမျှ ရှုံးဖူးသည်မရှိ၊ ခုမှသစ္စာဖောက်ခံရ ပြီး အလစ်မှာ အတိုက်ခံရ
သောကြောင့် ရှက်ခြင်း၊ ဒေါသထွက်ခြင်းတို့ကို ခံစားနေရလေပြီ။ မင်းဧကရာဇ် တစ်ပါးအနေဖြင့် မြို့စားတပ် ၏ အာခံမှုကို ခံပြင်း
နေခြင်းလဲဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် မည်သူမှ ရန်သူတပ်အတွင်း ၀င်ကာ ရန်သူဗိုလ်၏ခေါင်းကို ဖြတ်ယူပါမည်ဟု မလျှောက်ရဲကြ။
လွယ်လှသောကိစ္စမဟုတ်သလို အခန့်မသင့်လျှင် ရန်သူလက်ချက်ဖြင့်ခေါင်းနှင့်ကိုယ် အိုးစားကွဲမည်မဟုတ်လော။ထိုစဉ်……..
“ကျွန်ုပ်ရအောင်ယူပြီး သုရှင်ထံကိုဆက်မည်….” အောင်မြင်ရဲရင့်သော အသံကြောင့် အားလုံး အသံလာရာကို လှည့်ကြည့်ကြရာ…. မသံလုံ …. မကြာသေးမည်ကမှ အနားခေါ်ကာမြှောက်စားခံထားရသော သမိန်သံဗြတ် ၏သူရဲ မသံလုံ ….
သံမောင်မြို့၏ညအချိန်၊တိတ်ဆိတ်နေသောလဲ မဂြိုင်းမှာ မအိပ်နိုင်သေးဘဲ စံတော်အိမ်အတွင်း သလွန်ပေါ်တွင် ထိုင်လျှက်ပင်
ရှိနေသေးသည်။ ထိုစဉ် သူရဲတစ်ဦး ကိုယ်ကိုငုံကာ ခစားဝင်လာသည်ကိုတွေ့သောကြောင့် .. “ဟေ့.. ဘာကြောင့်ဒီအချိန်ကြီးမှ လာခစားရတာလဲ..မောင်မင်း”ဟုခပ်ပြတ်ပြတ် မေးမိ လိုက်သည်။”ရန်သူဦးခေါင်းဆက်သရန် လာခြင်းဖြစ်ပါသည်အရှင်” ..အသံမှာ ရဲရင့်လှသဖြင့် ရန်သူဦးခေါင်းကို အမှန်ပင် ဆက်လာသူဖြစ်မည် ဟုတွေးကာ … ခြင်းတောင်းအတွင်းမှ ခေါင်းပြတ်ကို ငုံကြည့်မိ
လိုက်သည်။ တဒင်္ဂ အတွင်းမှာပင်……မဂြိုင်းလည်တွင်ကျင်ခနဲဖြစ်သွားပြီးနောက်….
“ဟေ့ … ရန်သူ ၊ ရန်သူ .. မြို့စားမင်း လုပ်ကြံခံရပြီ .. ရန်သူ.. ”
သံမောင်မြို့အတွင်း ကမ္ဘာပျက်သကဲ့သို့ ဆူညံသွားသည်။ တပ်သားများ အသင့်မဖြစ်မှီပင် မသံလုံမှာ မြို့ပြင် သို့ရောက်သွားလေပြီ။ လုပ်ကြံမှုမှာ ရိုးရှင်းလွယ်ကူလှပါသည်။ ရန်သူခေါင်းပြတ် ကိုကြည့်ရန် ငုံလာသော မဂြိုင်း၏ခေါင်းကို ရုတ်ချဉ်း ထခုန်ပြီးခုတ်ဖြတ်ကာ ခြင်းအတွင်းမှ အိုးနှင့် ခေါင်းကို လဲလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။လုပ်ကိုင်ပုံပိရိ မြန်ဆန်သောကြောင့် စံအိမ်တော် တံခါးအပြင်မှ အစောင့်များ
များမကြာမှီ လဂွန်းဗျည်း မှ သုရှင်ရာဇာဓိရာဇ် ၏တဲနန်းအတွင်း….
မသံလုံ သွားခဲ့သည်မှာ ကြာမြင့်ပြီဖြစ်သောကြောင့် သုရှင်မှာ အတန်ပင် စိုးရိမ်နေမိပြီဖြစ်သည်။ မသံလုံ မှာ တိုက်ပွဲတွင်းတွင် ရဲဝံ့ပါသောလဲယခုကဲ့သို့ လုပ်ကြံရန်မှာ ရဲဝံ့ ယုံမျှမက ကြံရည်ဖန်ရည်နှင့်ပြည့်စုံရန် လည်းလိုအပ်ပေသည်။စဉ်းစားနေဆဲမှာပင် ….
ရှေ့တော်သို့ သွေးချင်းချင်းနီလျက်ရှိသော ခေါင်းပျက်တစ်ခု လှိမ့်ကာ ၀င်လာသဖြင့် သုရှင်မှာ လန့်ထိပ် တော်မူလေသည်။ ထိုအခြင်းအရာကို မြင်သော သမိန်သံဗြတ် က.. “သံမောင်စား မဂြိုင်း၏ဦးခေါင်းကို အရှင့်ကျွန် မသံလုံ ရသဖြင့်ဝင်ရောက်ဆက်သခြင်းဖြစ်ပါသည် ..အရှင်”
လျှောက်တင်သံကြားမှ သုရှင်လည်း အဖြစ်မှန် ကိုသိသဖြင့် မသံလုံ ကို ချီးမွမ်းတော်မူလေသည်… “ယောင်္ကျားကောင်းပီသပါပေသည်..။”
ကျုပ်မကျေနပ်ဘူးဗျာ။ ဒီလောက် ကြီးကျယ်တဲ့ အရေးကို အောင်တာတောင်ဗျာ။သူပုန်ခေါင်းကို ကျုပ် မှာစွန့်စွန့်စားစား တစ်ကိုယ်
တော် ၀င်ပြီး ဖြတ်လို့ သုရှင်ကို ဆက်တာ၊ သုရှင်က နှုတ်နဲ့ပဲ ..“ယောင်္ကျားကောင်းပီသပါပေသည်..။” တဲ့ ။ကျုပ်ဆုတော်
လာဘ်တော်တွေ မက်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ တဲနန်းထဲက မှုးမတ် ဒေါဗညားတွေ ရှေ့မှာ ကျုပ် နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ ချီးမွမ်းခန်းလေး
တော့ ဖွင့်ပေးဦးမှပေါ့။ ခုတော့ …….
မိုးပင်စင်စင် လင်းခါနီးသော်လဲ မသံလုံ အိပ်မရနိုင်ပဲ ဖြစ်နေသည်။သုရှင်သည် သူရဲကောင်းတွေကို ချစ်သည် ဟုကြားဖူးသည်မှာ
မဖြစ်နိုင်ဟုပင်တွေးမိတော့သည်..။သို့သော် .. ကိုယ်ကကျွန်၊ သူကအရှင်။မည်သို့မှ စောဒက မတက်ရာပေ ဟုနှလုံးသွင်းကာ စိတ်လျှော့လိုက်ရတော့သည်။
နောက် မော်လမြိုင်နှင့်မုတ္တမ မြို့များ သို့ အမတ်ကြီး သမိန်သံဗြတ် အပါအ၀င် အမတ်ဒိန်၊ ရဲသင်ရံ၊ဗြထဗိုက်၊အဲကောင်ဗိန်၊အဲနရဲ၊
ဗိုက်ပဲတို့တပ်(၇)တပ်ချီတက်ကာ သုရှင်က လဂွန်းဗျည်း မှသာ စံနေသည်။ ထိုစဉ် ဗြတ်ထဗ တို့ညီနောင်များလည်း ငှင်းတို့မြို့
အသီးသီး မှ အင်အားစုစည်းပြီး ထိုတပ် (၇) တပ်တို့ ကို လမ်းတွင် ညအချိန် အလှစ်ဝင်တိုက်သဖြင့် သမိန်သံဗြတ် နှင့် အမတ်ဒိန်
တပ် (၂) တပ်သာ ကျန် ပြီး ကျန် တပ်များ ပျက်လေတော့သည်။ သို့သော် …….
“သွေးသောက် သံဗြတ် ၊ ဆုတ် မည်လော..။” အမတ်ဒိန် အသံမှာ အလောကြီးလျက်ပင်ရှိလေသည်။မလောလဲမရနိင်။တပ်(၇)တပ်
လာရာ၊ယခု တပ် (၂) တပ် သာကျန်တော့သည် မဟုတ်ပါလော။ ဒါတောင် ရန်သူ များက အကုန်ချီမလာကြသေး။ချောင်းတစ်ဖက်
တွင် တပ်အချို့ ကျန်နေသေးသည်။ သမိန်သံဗြတ်က ..
“ငါတို့ဆုတ် သော် မင်းဧကရာဇ် ၏အရေးတော်ပုံပျက်ချေမည်။ယခုလည်း ငါတို့တပ်(၂) တပ်ကို သူတို့ ပျက်ရန်မတိုက်နိုင်သေး။
တပ်တွင်းမှ စစ်သည်တို့ကို အသံတိတ်နေပါစေ။ ငါတို့ ပရိယာရ် ပြုပြီးအနိုင်ယူရမည်။ငါတို့တပ်တွေ ဆုတ်ဟန်ပြုပြီး အထုတ်အပိုးတို့
ကိုပြင်မည်။သူတို့ဖက်က မြင်သော် ဆုတ်ပြီအမှတ်နှင့်ပေါ့ပေါ့ လျှော့လျှော့ တိုက်လာလျှင် ငါတို့အပြင်းတိုက် ကာ အနိုင်ယူပြစ်မည်။”
“ဟေ့ .. မသံလုံ .. အသင့်ပြင်စမ်း၊ရန်သူတွေ ချောင်းကူးလာရင်မင်းဦးဆောင်ပြီး အပြင်းသာတိုက်ချေ၊တပ်ဦးကနေမင်းမခွာလေနှင့်..။”
များမကြာမည်….အမတ်ဒိန် နှင့် သမိန်သံဗြတ် တို့(၂)တပ်သည် ရန်သူ တပ်အားလုံးကို အနိုင်ရပြီး အောင်ပန်းဆင်လျှက် မော်လမြိုင်နှင့် မုတ္တမ မြို့များကိုရလေသည်။
သုရှင်လည်း အားရတော်မူသဖြင့် အမတ်ဒိန် နှင့် သမိန်သံဗြတ်တို့အားဆုလာဘ်တော်များ ချီးမြှင့်ပြီး သမိန်သံဗြတ်ဟူသော်အမည်နာမ မှသမိန်ဗြာဇ္ဇ ဟူသော ဘွဲ့ဖြင့်တိုးတက် ချီးမြှောက်လေသည်။
သုရှင်ရာဇာဓိရာဇ် သည် ရာမညတိုင်း မွန်သုံးရပ် တွင်အရှေ့တစ်လွားကိုသိမ်းသွင်းတော်မူပြီး၊မြို့စား၊ရွာစားများ အသီးသီးထည့်ကာ ဟံသာဝတီနေပြည်တော်(ပဲခူး)သိူ့ပြန်လေသည်။ လမ်းခရီး တစ်ထောက်နားရာ တိုက်ကုလား မြှိုသို့ရောက်လျှင်…….
မှုးမတ်၊တပ်သားအပေါင်းတို့လဲ ဘုရင့်နန်းတစ်ခုကို အချိန်မဆိုင်းပဲတည်ဆောက်ကြလေသည်..။
ထိုည…. တပ်တဲတစ်ခုအတွင်း ..
`လာ ..မသံလုံ .. မင်းကို ငါဒီညမှာ ဧည့်ခံကျွေးမွေးပေမည်။ မင်းအ၀သာ စားယစ်လေ…။´ ဗိုလ်မင်း ဗြာဇ္ဖစကားအဆုံးမှာကျုပ်
နားတောင်ကျုပ်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဲဖြစ်သွားတယ်။အမတ်ကြီးလို သက်ကြီးဝါကြီးတစ်ယောက်က ကျုပ်ကိုစားပွဲ တည်ခင်းတယ်
ဆိုတော့ ကျုပ်အကြီးအကျယ်အံ့အားသင့်တာဆန်းသလားလေ။ အမတ်ကြီးလဲ ကျုပ်အကြောင်းတွေကို ထွေတွေရာရာမေးမြန်းလို့ ကျုပ်နဲ့အတူ ထိုင်ပြီး စားသောက်ပါတယ်။ အစတော့ ကျုပ်လဲ သူ့လို လူကြီးသူမနဲ့ တစ်စားပွဲထဲထိုင်ပြီးသောက်စားရတာ သိပ်တော့
မရဲလှပေမယ့် အချိန်လေးကြာလာတော့ ရင်းနှီးလာတာတစ်ကြောင်း၊နောက် ယစ်ရွှေရည်တွေရဲ့တန်ခိုးကြောင့် တစ်ကြောင်း ပြောရ
ဆိုရတာ တော်တော်ကို ကောင်းလာတာပေါ့ဗျာ။ နောက်တော့ သောက်ရင်း သောက်ရင်း ကျုပ် ကိုကျုပ် ဘာဖြစ်လိုက်မှန်းကို
ကျုပ်မျက်လုံးနှစ်လုံးပွင့်တော့ ကျုပ်အရင်ဆုံးတွေ့လိုက်ရတာက အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်။ ဘယ်သူတွေလဲ ။ ကျုပ်လဲ မူးရီဝေနေဆဲမို့ ခေါင်းက ကောင်းကောင်း မကြည်လင်သေးပေဘူးပေါ့။ တစ်ယောက်ကိုတော့ သေသေချာချာ မြင်ဖူးသလိုတော့ရှိသလိုပဲဆိုပြီး ပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ …. ဘုရား၊ကယ်တော်မူပါ။ ဒါသုရှင်ရဲ့ မောင်းမတော် မေနှင်းကေသရာပဲ။ ဒုန်ဝုန်းစား သမိန်သံလှစ်ရဲ့သမီး၊
သုရှင်ရဲ့ကိုယ်လုပ်မောင်းမတစ်ပါး။ ဒါဆိုရင်..ဒီနေရာကရော။ ဟင် ဒါ….ဒါ ….. သုရှင်ရဲ့တဲနန်း၊ဒါသုရှင်ရဲ့ သလွန်တော်.. ဟာ..
သွားပြီ။ငါ…. ငါ၊ဘုရင့်နန်းပေါ်တက်၊ ဘုရင့်မောင်းမ တွေနဲ့ ……. အား…………
ကျုပ် မျက်လုံးတွေပြာသွားပြီး သလွန်ပေါ်က ခုန်ချဆင်းပြေးဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် မောင်းမနှစ်ယောက်က ကျုပ်ကို တစ်ယောက်တစ်ဖက်ဆွဲထားပြီးတားနေတယ်ဗျာ။
`ကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါသည်။ကျွန်ုပ် စားသောက်လို့လူမှန်းမသိအောင်မူးယစ်သောကြောင့် ၊သုရှင်အိမ်နန်းပေါ်သို့တက်ကာပြစ်မှား
ကျုပ်ပြောလို့အပြီးမှာတော့ မေနှင်းကေသရာ က “မရုန်းပါနဲ့ မောင်ကြီး၊နှမတော်ပြောတာကို နားထောင်လှည့်ပါ။မစိုးရိမ်၊မကြောက်
ကျုပ်လဲ မရုန်းမကန်တော့ပဲ ရင်တစ်ထိတ်ထိတ်နဲ့နေတော့မှ သူကဆက်ပြီး…”သုရှင်က မောင်ကြီးကို ဒီ တိုက်ကုလားမြို့ကိုစားစေ
တယ်။ပြီးတော့ လဂွန်းအိန် ဆိုတဲ့ ဘွဲ့ရွှေနဖူးစီးနဲ့ ဒီခေါင်ငါးဆက်အိမ်ကြီး၊ ဆင်ပေါက်ငါးစီးပေးတဲ့အပြင် နှမတော်တို့နှစ်ယောက်
ကိုလဲ ကတော်မယား အဖြစ် ဆောင်နှင်းစေသည်။မောင်နေရာမှားလာသည်မဟုတ်။ဒီနေရာ၊အိမ်၊သလွန်၊မယား အားလုံးကို မောင်
ပိုင်ပါသည်။မယုံလျှင် နဖူးမှ ရွှေဘွဲ့ပြားသရဖူကို စမ်းကြည့်ပါ။”
ကျုပ်လဲ သူပြောအပြီးမှာ သူ့စကားအတိုင်း နဖူးကို ကိုင်စမ်းကြည့်တော့မှ မာမာ အရာတစ်ခု စမ်းမိတယ်။ ဒါနဲ့ အစည်းဖြေကြည့်တော့
မှ လဂွန်းအိန် ..တဲ့။ လဂွန်းအိန် …။ ဟာ .. ၀မ်းသာလိုက်လေခြင်း။ငါ့ကို သုရှင်က ဘ၀ပြောင်းစေခဲ့ပြီ။ ကြည့်စမ်း အိမ်တော်၊မယား၊ စားရန်မြို့ ။အကုန်ပြည့်စုံပြီပဲ။ကျုပ် နဖူးစည်းရွှေပြားကို ကြည့်ရင်းဝမ်းသာလိုက်တာဗျာ။ လဂွန်းအိန်… နတ်သိကြားကဲ့သို့ အစွမ်း
ထက်သူ …တဲ့။ ကြီးကျယ်လိုက်တဲ့ဘွဲ့ပဲ။
သြော်..သိပြီ။ ကျုပ် သံမောင်စားမဂြိုင်း ခေါင်းကို ညချင်းဖြတ်လို့ ဆက်သစဉ်တုန်းက ရုတ်တရက်မို့ သုရှင်ထိတ်လန့်လေတယ်။
ဒါ့ကြောင့်ကျုပ်ကို ဆုလာဘ် တစ်စုံတစ်ရာ မချီးမြှင့်ပဲ နုတ်အားဖြင့်သာချီးမွမ်းတော်မူတာပေါ့။ခကျုပ်ကိုချီးမြှောက်တဲပ့ အခါကြမှ သူ့ကို လန့်အောင်လုပ်တဲ့ ကျုပ်ကို လန့်အောင် ပြန်ကျီစားတာကိုး…. ။ ကျုပ်ဝမ်းသာတယ်ဗျာ။ ဒီလို ထိုက်တန်တဲ့ ချီးမြှောက်မှုကြောင့်ပေါ့။
သုရှင်ဟာတစ်ကယ်ပဲ သူရဲကောင်းတွေကို ချစ်တယ်ဆိုတာတော့ ကျုပ် ရှင်းရှင်းကြီးယုံကြည်သွားပါပြီလေ။ကျုပ်လက်အစုံကလဲ သုရှင်ရှိမယ့် အရပ်ဆီကို ရည်စူး မိုးလို့ပေါ့။
သက္ကရာဇ် ၇၅၀ တွင် ရာဇာဓိရာဇ် နှင့် အမေတူ အဖ ကွဲ နောင်တော်သူ ဒလစား မညီကံကောင်းသည် မြောင်းမြ စားလောက်ဖြားနှင့်
သစ္စာပြုကာ ပုန်စားလေ၏။ သုရှင်လဲ ဒလ တို့ချီကာနှိမ်နှင်းပြီး နောင်တော် မညီကံကောင်း အားကွပ်ကာ ငှင်း၏သား၊တူတော်
ဘောကျော် အားသစ္စာ ခံစေသည်။ထို့နောက် အဖ၏ အရိုက်အရာ အမွှေအနှစ်တို့ကိုဆက်လက် ခံစားစေသည်။
နောက် မြောင်းမြ ကိုချီတက်ရန် အမတ်၊သေနာပတိ တို့ ကိုခေါ်ဆောင်ပြီး ချီလေသည်။ သို့သော် မြောင်းမြ မှာကျုံးလည်းကျယ်၊
မြို့ရိုးလည်း ခိုင်လှသဖြင့် မအောင်နိုင်ပဲရှိလေသည်။ ထို့ကြောင့် စစ်ရေးသာလောက်သည့် ပုသိမ်(ကုသိန်) သို့အရင်ချီသင့်ကြောင်း
မှုးမတ်များ က လျှောက်သောကြောင့် ပုသိမ် သို့ အလျှင်ချီတော်မူလေသည်။ ပုသိမ် ကိုစားသော သူတို့ မှာ လောက်ဖြား၏သား
လောက်ရုန် နှင့် လောက်သိန် တို့ဖြစ်ကြသည်။ပုသိမ်ရောက်လျှင် စိတ်မချသဖြင့်ဟံသာဝတီတွင်အချုပ်၌သွင်းထားသောညီတော်
ဘောငံမုန်(အဖတူအမိကွဲ)ကို အမတ်အဲကောင်ဗိန်အားစေလွတ်ပြီး ကွပ်စေသည်။ပုသိမ် သည်လည်း မြောင်းမြ နည်းတူအင်အား
ဒဂုံသို့သွားကာ ပုန်ကန်ရန်စီစဉ်ကတည်းကပါဝင်ကူညီသူ)လည်းကျဆုံးသောကြောင့် သုရှင်က မြောင်းမြ အားအရတိုက်လျှင် ပုသိမ် ကိုအလွယ်ရနိုင်သည်ဟု ဆိုကာ တပ်ကိုရုပ် ပြီး မြောင်းမြသို့ ပြန်ဦးလှည့်တော် မူရာ……
လောက်ရိုန် နှင့် လောက်သိန် တို့ က ထိုသတင်းကိုကြားသောကြောင့် .. ယခု ဗညားနွဲ့ သည်ငါတို့ကို မတိုက်နိုင်သဖြင့် မြောင်းမြသို့
လှည့်ချေပြီ။ ငါတို့စစ်နှင့် မြောင်းမြစစ် တို့နှစ်ဖက်ညှပ်တိုက်ခဲ့လျှင် သူမခံနိုင်.. ဟုဆွေးနွေးပြီး နောက်မှ အပြင်းလိုက်ရာ ပန်းလိုင်သို့
ရောက်လာကြလေ၏။ထို သည်ကိုကြားသော သုရှင်က …..
“လဂွန်းအိန်..ရန်သူ့တပ်များ အခြေမကျမှီ လိုင်ဝ သို့ချီချေ။ကြည်းပေါ်လည်းလုအချို့နေစေပြီး ချောင်းတွင်းတွင်တိုင်များစိုက်လော့။
ရေတက်လျှင် တိုင်ဖျားကိုကမ်းတစ်ဝက်သာပေါ်စေရမည်။ရေကျချိန်တွင်မှ တိုင်အလုံးပေါ်ရမည်။ပြီးလျှင် လူမာလူစွမ်း များကို ရွေးကာ လှေငယ် ၂၀ဖြင့်စစ်ယောင်ပြပြီးတိုင်များရှိရာသို့သင်းတို့ကို မျှားလာရမည်။ သင်းတို့လှေမှာ လှေကြီးဖြစ်သောကြောင့် တိုင်များတွင်
ငြိလျှင် ရုတ်ရုတ် ရက်ရက်၊ဖီလာကန့်လန့် ရှိကာမှ မင်းတို့ တစ်ဟုန်ထိုး တိုက်ရမည်။ ဒီလိုဆို နိုင်မည် မချွတ်(မလွဲ)။”ဟုမိန့်လေ၏။
ထိုနောက် လဂွန်းအိန် စိတ်ဓါတ်တက်ကြွစေရန် မိဖုရားငယ်တစ်ပါးဖြစ်သော မွေ့သင် ခေါ် ဒလသုဒ္ဒမာယာ (ဘုရင်မကြီးရှင်စောပု
ကျုပ်စိတ်တွေ မလုံဘူးဗျာ။ဒီနေ့သုရှင်က မိဖုရားကို ကွမ်းဆက်စေတာ၊မိဖုရားရင်လွမ်း လျှောကျပြီး မိဖုရားရဲ့ အလွန်လျှို့ဝှက်အပ်တဲ့
အလှကို ကျုပ်မြင်လိုက်တယ်။ ဒါကို သုရှင်လဲအတွေ့ပဲ။အင်း…ထားပါလေ။ခုချီရမယ့် စစ်မှာ ပုသိမ်လှေတပ်ကလဲ အင်အားမသေးလှဘူး။
ကျုပ်က လှေငယ်လေး ၂၀ တည်းနဲ့သွားရမှာ။သုရှင် ကျုပ်ကိုချစ်မချစ် စမ်းသပ်ရမယ်။ အမှန်တကယ် ကျုပ်ကို တန်ဖိုးထားခဲ့ရင်တော့
ကျုပ်အသက်စွန့်ပြီး ဒီတာဝန်ကိုထမ်းမယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ သေတာချင်းအတူတူ ရန်သူလက်ချက်နဲ့တော့ အသေမခံပဲ ဒီမှာပဲအသေခံ
တော့မယ်။…စဉ်းစားပြီးတပ်သားတွေကို ကျုပ်လှေပေါ်ကနေအမိန့်တစ်ခုပေးလိုက်တယ်.. “ဟေ့ .. မင်းတို့တပ်မင်းလဂွန်းအိန်ကို မေးရင် အနာရောဂါကြောင့် မကျန်းမမာ ဖြစ်သည်လို့ဖြေကြ…။”
မကြာမှီ ဗိုလ်မင်း သမိန်ဗြဇ္ဇ နှင့် အမတ်ဒိန်တို့လဲ လဂွန်းအိန် အချိန်တန်ပါလျှက် တပ်မထွက်သည်ကြောင့်အကြောင်းစုံသိရန်
လဂွန်းအိန်လှေသို့လာကြလေ၏..။လှေစောင့် တပ်သားများကလဲ ဗိုလ်မင်း လဂွန်းအိန် နာဖျားလေသော်ကြောင့် စစ်မချီနိုင်ကြောင်း
လျှောက် လေရာ အမတ်ကြီး ၂ ပါးလဲ လှေပေါ်တက်ပြီး လဂွန်းအိန် ကိုယ် ကို စမ်းသပ်ကြလေ၏..။
`အပူဖျားအအေးဖျား တစ်စုံတစ်ရာသောရောဂါလက္ခဏာသော်မှ မရှိ၊မင်းအဘယ်ကြောင့် ဤသို့ပြုသနည်း…´
ကျုပ်လဲ အကြံရှိနေတဲ့အတိုင်း .. `ယမန်နေ့က မိဖုရား ဒလသုဒ္ဓမာယာ ကျွန်ုပ်အားကွမ်းဆက်ရာတွင် ရင်ဝတ်တန်ဆာ လျှောကျသဖြင့်
မြင်မိသောအသွေးအရောင်မှာ ပဒုမ္မာ ကြာပွင့်ကဲ့သို့တင့်တယ်လှသောကြောင့် စိတ်ကိုကျွန်ုပ် မချုပ်တီးနိုင်။ထိုအာရုံတွင်သာကပ်ညှိ
နေသောကြောင့် မအိပ်အစားမနေနိုင်၊စစ်ထွက်လျှင်လည်း သေမည်မုချပင်။ထို့ကြောင့် သေသည်ချင်းအတူတူ ကျွန်ုပ်ဒီမှာပင်နေတော့
အမတ်ကြီး ၂ ပါးလည်းကျုပ်ရဲ့ဒီစကားကိုကားတော့ မျက်နှာပျက်ပြီး.. `ငါ့တူ လဂွန်းအိန်၊အဘယ်ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရသနည်း။ သခင်ပေး
သော ၀န်ကို ကျွန်ဖြစ်သောသူက မြဲရမည်ဖြစ်သည်။ `တောကိုလဲ မမင်နှင့်၊မင်းကိုလဲ မယုံနှင့်´ ဟူသောစကားပုံကိုဆင်ခြင်ပါလေ။မင်းမှာ စစ်တပ် တစ်တပ်ကို ဦးစီးရသော ဗိုလ်မင်းဖြစ်လေသည်။ သုရှင်ကလဲ အားရသောကြောင့် စားရန်မြို့၊မောင်းမ မယားများကိုလဲပေးခဲ့ဖူးပြီ။
ပေးသောည်းစိမ် နှင့် မတန်ရာကိုမင်းပြုလေသည်။ ရာဇ၀တ်ကျင့်ထုံးကို မင်းမသိလေသလော။ သုရှင်က မင်းကို ချစ်လှပြီဟု မာနထောင်
လွှားကာ ယခု မိဖုရားပါမင်းလိုချင်လေပြီ။ မင်းစိတ်ကိုမင်းပြင်ဆင်ပါ…´ အစရှိသဖြင့်ဆုံးမကြလေတယ်။
ကျုပ်ကလဲ အကြံသမားပီပီ ပေကပ်နေတော့တာနဲ့ လက်လျော့ပြီး ပြန်ကြပါတယ်..။
မကြာခင်မှာပဲကျုပ်ဆီကို သုရှင်က သူ့မိဖုရားကိုအမတ်ကြီး ၂ပါးနဲ့ပို့လာပါတော့တယ်။ကျုပ်လဲ အံ့သြ၊၀မ်းသာတာနဲ့ ရုတ်တရပ်မှင်
သက်ပြီး၊စကားရှာမရပဲ ဖြစ်နေသေးတယ်လေ။ သုရှင်က ကျုပ်ကို သူ့မိဖုရားထက်ကို ချစ်တာပေါ့..။ ဟား..ဟား။ကျုပ်စစ်ထွက် ရတာ
သေပျော်ပါပြီလေ။ ဒါနဲ့ ကျုပ်လဲ ရှင်မိဖုရားကို ပန်းပေါက်ပေါက်တို့နဲ့ ပူဇော်တောင်းပန်ပြီးအမတ်ကြီး ၂ ပါးကို ပြန်အပ်လို့ သုရှင်ကို
ပြန်ဆက်ကြောင်း၊ လဂွန်းအိန် စစ်ထွက်ပြီဖြစ်ကြောင်းသံတော်ဦးတင်ဖို့ရာ မှာကြားလိုက်တယ်။
ထို့နောက် ပန်းလိုင်တွင် သုရှင် မှာကြားသော အစီအရင် များလုပ်ပြီး စစ်ကိုတိုက်လေရာ ပုသိမ်လှေတပ်(လှေ၅၀၀ကျော်)မှာထောင်း
ထောင်းပျက်လေတော့သည်။လောက်ရိုန်လည်း လှေမှ ကုန်းသို့တက်ပြီး မြောင်းမြသို့ပြေးသောကြောင့် ပုသိမ် ကိုလဂွန်းအိန်
သိမ်းယူပြီး သုရှင်ထံသို့ဆက်လေသည်။သုရှင်လည်း အားရတော်မူလှသဖြင့် ချီးမွမ်းပြီးဆုလာဘ်များတိုးကာချီးမြှင့်
ထို့အတူ ဒေးပသွယ်ကို အမတ်ဒိန်ရလေသဖြင့် သုရှင်ကိုဆက်လာသည်။ထို့နောက် မြောင်းမြသို့ချီတက်လုပ်ကြံလေသည်။မြောင်းမြ
တွင်လောက်ဖျား၏သား မပစ်နွယ်(မြန်မာမူတွင် ဗျည်းနွဲ့) ကတစ်ဦးချင်းဆင်စီးချင်းထိုးကာ အနိုင်အရှုံးဆုံးဖြတ်ရန်အရေးဆိုရာ
ရာဇာဓိရာဇ် ကလက်ခံပြီး တစ်ဦးချင်းစီးချင်းထိုးအနိုင်ယူရာ မြောင်းမြ ကိုရပေသည်။သို့သော်အသက်နှင့်နီးလှပေသည်။ဘုန်းကံကြီးသူ
ဖြစ်သဖြင့် မပစ်နွဲ့ ခုတ်ရန်ဓါးဆွဲထုတ်ရာတွင် ဓါးအိမ်မှဓါးမကျွတ်လေသောကြောင့်သာ။နောက်ဂတိအတိုင်း လောက်ဖျားအားအသက်မှ
လွတ်ပြီး ဒဂုံဆတော်ရှင်ဘုရား(ရွှေတိဂုံဘုရား)တွင်သီလဆောက်တည်စေသည်။ မပစ်နွဲ့ကို ထားလိုသော်လည်း `မနေလိုတော့´ ဟု
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၇၅၂ ၊ ရာဇာဓိရာဇ် သက်တော် ၂၃ နှစ်တွင် အင်းဝပိုင် ကူထွတ်(ယခု မြန်အောင်မြို့)ကို အင်အားအပြည့်အစုံဖြင့်
ချီတက်တိုက်ခိုက်ကာသိမ်းပိုက်လေသည်။နောက် သမိန်ချစ်ဗေတ နှင့် သမိန်သံကြယ် တို့ ၂ယောက်အားစောင့်စေပြီး ဟံသာဝတီ
လည်းတော်စပ်သော တလမေဒေါနှင့်မွေးသူ၊မိခင်မှာ ဗညားနွဲ့နန်းတက်စဉ်က မွေမနိတ်အား မိဖုရားကြီးအရာပေးသောကြောင့် အဆိပ်သောက်ပြီးသေ)မှ ဆင်မြင်း လေ့ကျင့်သည်၊စစ်ရေးအတတ်ကိုလေ့လာသည် ဟုကြား၍ အဲကောင်ဗိန် အားသွားဖမ်းစေကာ သတ်စေသည်။ဘောလောကျန်းဒေါလည်း စိတ်နာလှသောကြောင့် မိမိ ၏ရွှေအဆင်တန်ဆာတို့ကို ချွတ်ပြီးရွှေမော်ဒေါဘုရားကို
လှု၍ ဆုတောင်းကာ အဆိပ်သောက်သေလေသည်။တောင်းသောဆုမှာ ` ကျွန်ုပ်သေလွန်သော် အင်းဝမင်းမိဖုရားတွင်ဝင်စား၍
မြန်မာမင်းသားဖြစ်ရလိုပါ၏။ အရွယ်ရောက်လျှင် ခမည်းတော် ရာဇာဓိရာဇ် နှင့်စစ်ခင်းကာ မွန်၃ရပ်ကို နှိပ်စက်ရပါစေသား´ ဟူ၍
သည်။( နောင်တစ်ချိန်တွင် မွန်မင်းသား တစ်ပါးဖြစ်သူ မင်းရဲကျော်စွာသည်ခမည်းတော် ဓမ္မစေတီမင်းက သတ်စေသောကြောင့် ဤကဲ့သို့
ပင်ဆုတောင်းကာ တောင်ငူဘုရင် တပင်ရွှေထီးဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုပါသည်။)
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၇၅၄ တွင် အင်းဝမင်းကြီးစွာ သည်ကူထွတ် ကိုပြန်သိမ်းယူရန် တိုက်ဆင် ၈၀၀၊မြင်းသည် နှစ်သောင်း ၊အင်အား
တစ်သိန်းနှစ်သောင်း နှင့်ချီလာလေသည်။ရာဇာဓိရာဇ် လည်း ကြည်းရေ တပ်များဖွဲ့ ပြီး ကူထွက်ကိုချီလေသည်။
ရေတပ်တွင် ဟံသာဝတီမှ အနည်းငယ်အသာရပြီး၊ ကြည်းတွင်မူ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် အနိုင်မရနိုင်ဘဲရှိလေရာ ရေတပ်မှ အမတ်ကြီးများဖြစ်ကြသော အမတ်မဟာသမွန်၊အမတ်ပွန်စီ၊အဲကောင်ဗိန် နှင့်ဗြထဗိုက် တို့ကကူထွပ်နှင့်အလွဲ တို့ကို အင်းဝအားပြန်ပေးပြီး သုရှင်အားစစ်ပြေငြိမ်းကြောင်း ရာဇသံ ဆက်ရန်နှင့်သံတမန်များစေလွတ်ရန် အကြံပြုလျှောက်ထားသဖြင့် သုရှင်က သဘောတူလေသည်။
ထို့နောက် ရာဇာဓိရာဇ် နှင့် မင်းကြီးစွာစော်ကဲတို့လဲ အသီးသီး စစ်ပြေငြိမ်းလျက် ပြန်လေသည်။ ထိုနှစ်တွင် မိဖုရားကြီး မွေမနိတ်(ပီယရာဇာဒေ၀ီ)လွန်သည်။ သက္ကရာဇ် ၇၆၂တွင် မင်းကြီး စွာစော်ကဲ နတ်ရွာစံပြီး သားတော် ဆင်ဖြူရှင် နန်းတက်လေ၏။ တစ်နှစ်အကြာတွင် တကောင်းစား ငနောက်စံ လုပ်ကြံ၍ လွန်သော် ညီဖြစ်သူ မင်းဆွေက မင်းခေါင် အမည်ယူကာနန်းတက်လေသည်။
ထိုသို့ရှိရာ ပုဂံနှင့်အင်းဝသားများ ညီညွတ်မှုမရှိဘဲ မင်းခေါင်၏ညီတော် မင်းသိဒ္ဒတ် သည် ရာဇာဓိရာဇ် ထံသို့ ခိုဝင်ခစားလာသည်။
ဤအချိန်တွင် သုရှင်ရာဇာဓိရာဇ်က အချက်ပိုင်ပိုင်ဖြင့် အင်းဝထိချီတက် သိမ်းပိုက်ရန် စစ်ပြင်လေတော့သည်။ကြည်းတပ်ရှေ့ဆုံး
စစ်ဖျားချီတပ်တွင် လဂွန်းအိန် ကိုထားသည်။ပြည်မြို့ကိုရောက်သော် ပြည်စားလက်ယာပျံချီ (မြောင်းမြစားလောက်ဖျား၏သား
တရဖျား၊အင်းဝတွင်ခစားသဖြင့် ပြည်မြို့တွင် မြို့စားခန့်ထားသူ)မှထွက်မတိုက်သောကြောင့် အရံသာထား၍ဆက်လက်ချီတက်လေ
သည်။စစ်ကိုင်းရောက်သော် အင်းဝမှ လည်း ပြည်နည်းတူ မြို့တွင်းမှတွက်ပြီးမတိုက်သဖြင့် တကောင်းအထိချီတက်သိမ်းယူလေသည်။
ပြည်တွင်အရံထားခဲ့သော သားမက်တော် စောမဟာရာဇ်၏ ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် တပ်ပျက်ပြီး သမီးတော် တလမေကျော်(တလမည်ကျော်)ကို လက်ယာပျံချီ ရ၍ အင်းဝသို့ ပို့လေရာ မင်းခေါင်က သားတော် သိင်္ဂသူ(သီဟသူ)နှင့် စုံဖက်စေသည်။အင်းဝသည် သုရှင်ရာဇာဓိရာဇ်၏
စစ်ကို ထွက်မတိုက်ပဲ ပညာရှိအပေါင်းတို့ကို ခေါ်ယူဆွေးနွေးရာ ပင်းယစကြိုသူမြတ်(ပန်းယသကြိုသူမြတ်)အမည်ရ သံဃာတော် တစ်ပါး
မှ တာဝန်ယူကာ စစ်ငြိမ်းရန် ကြံဆောင်ပါမယ်ဟု ဂတိပြုလေသည်။
ထို့နောက်တွင် ဘုရင်မင်းခေါင်၏ရာဇသ၀န်လွှာ၊လက်ဆောင်ပဏ္ဏာများနှင့် သူမြတ်သည် ရာဇာဓိရာဇ်ထံဝင်၍လျှောက်ထားလေသည်။
ထို့ကြောင့် ရာဇာဓိရာဇ် လည်း ထို ပင်းယသူကြိုသူမြတ် နှင့် စကားပြိုင်ဆိုင် ပြီးအခြေတင် အရေးဆိုကာ နောက်ဆုံးတွင် အင်းဝအနီး
တစ်ဝိုက်၌ သာဿနာရေးအဆောက်အဦးများ တည်ထားပြီး ပြန်လေသည်။ပြန်လှည့်ရာတွင် အင်းဝသားများက သုရှင်ကောင်းမှုတို့အား မီးတင်တိုက်လေသောကြောင့် ဒေါသဖြင့်ပြန်လှည့်ရန်မိန့်သော်လည်း ပင်းယသူကြိုသူမြတ်၊အမတ်ဒိန်၊သမိန်ဗြာဇ္ဇတို့ကတောင်းပန်
လေသဖြင့်ဆက်စုန်လေသည်။သမီးတော် အင်းဝသို့ပါကြောင်းကိုမူ ဒလ(ယခု တွံတေးမြို့နေရာ)ရောက်မှ သိသဖြင့် သားမက်တော်
နောက်နှစ်တွင် သုရှင်သည် ဘုရင်မင်းခေါင်အား အမျက်မပြေနိုင်သောကြောင့် စစ်ချီပြန်သည်။မင်းခေါင်လည်းစစ်ကူသုံးသောင်းကို ပြည်မြို့သို့အမြန်ချီစေသည်။ရေတပ်တွင် သုရှင်ချီ၍ ကြည်းတွင် သမိန်ဗြာဇ္ဇ က တပ် ၇တပ်ကီုးဆောင်ချီသည်။ တပ်ဖျားတွင် လဂွန်းအိန် ကိုချီစေသည်။ သာဝတ္ထိသို့ရောက်သော် ….
သမိန်ဗြာဇ္ဇမှ အမိန့်ပေးလေသည်။ဟေ့..လဂွန်းအိန် ..မင်းတပ်သည်ရှေ့ဖျားစစ်ဖြစ်သည်။ အလျင်မလိုနှင့် ..။ခိုင်ခံ့စေရန်အသင့်ပြင်ထားလေ။ ရန်သူ့အသွားအလာကို ကြည့်၍ငါအချက်ပေးမှ တိုက်မည်။ ငါအချက်မပေးလျင်မတိုက်နှင့် …
ကျုပ်လဲ အစွမ်းပြချင်နေတဲ့အကျင့်ကမပျောက်လေတော့ ကန့်လန့်ပဲတွေးမိတယ်လေ။ ရန်သူစစ်ကိုမြင်တောင်မတိုက်ရလောက်အောင်ပဲ ကျုပ်ကသွေးနည်းနေတာမှ အဟုတ်တာ။ရန်သူကိုတိုက်ရအောင် သုရှင်က ကျုပ်တိုိ့ကု ဒီအရောက်စေလွတ်လိုက်တာမဟုတ်လား။ကျုပ်မနေတော့ဘူး။ အခုပဲထွက်တိုက်မယ်။
ဤသို့ဖြင့် လဂွန်းအိန်သည် တပ်မှုးချုပ် ၏အမိန့်ကို ဖီဆန်ပြီး လွင်ပြင်သို့ အင်းဝတပ်အရောက်တွင် တစ်ရှိန်ထိုး ထွက်၍တိုက်လေသည်။ လဂွန်းအိန် ထွက်သည်ကို မြင်လျှင် ဥပါကောင်း၊ဘောကျော်နှင့် ဗြထဗိုက်တို့ ၃တပ်လည်း ထွက်တိုက်၏။ အင်းဝတပ် များအပြင်းပြန်တိုက်လေသောကြောင့် ရှေးဦးစွာ လဂွန်းအိန် တပ်တွင် စစ်သည်အများအပြားကျ ၍ဆုတ်ရ၏။ နောက် မှလိုက်လာကျသော် တပ်၃တပ်လည်း အခြေအနေ အကောင်းသောကြောင့် တောတွင်းသို့ရှောင်ရလေ၏။
တပ်၎ တပ်တော့ပျက်ချေပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့ ခွာလျှင်သင့်မည်လော။ ဆက်တိုက်လျှင်သင့်မည်လော။ ..ဟု သမိန်အ၀နံနိုင်
(သမိန်အင်းဝနံနိုင်) ရေးကြီး သုပ်ပြာမေးလေသည်။ မိမိတို့၏ တပ်၎တပ်မှ ရန်သူထိုးစစ်ကြောင့် တပ်ပျက်ကာ တောတွင်းသို့ ရှောင်ရလေပြီမဟုတ်လော။ ထိုအခါ .. သမိန်ဗြာဇ္ဇ က … `ကျွန်ုပ်တို့ ပြေးမည်ဆိုပါက အရှင့်ဘုန်းရိပ်ကို အကျိုးမဲ့ ခိုလုံရာရောက်ပေတော့မယ်။ငါတို့လက်လျှော့ရန်မရှိ။ ရန်သူကိုသာ မနိုင်မချင်း ဆင်ထက်မှ တိုက်တော့မည်။´ ဟုဆိုကာတိုက်လေရာ အင်းဝစစ် ပျက်လေသည်။ အင်းဝစစ်အပျက်တွင် လဂွန်းအိန် သည် တောတွင်းမှ
ပြန်ထွက်၍ ဗိုလ်မင်းသမိန်ဗြာဇ္ဖ တိုက်၍မပြီးမှီ သုံပန်း ဆင်မြင်း အများအပြားကို အရယူပြီး သုရှင်ထံဦးစွာ ပြန်ပြီး ဆက်သလေသည်။
ဤသည်ကို သမိန်ဗြာဇ္ဖ ပြန်အရောက်တွင်ကြားလေရာ သုရှင်ထံအခစားမ၀င်၊အကြောင်းမလျှောက်ပဲနေလေရာ သုရှင်က အခေါ်လွတ်ပြီး အဘယ့်ကြောင့်အခစားမ၀င်သနည်း..´ ဟုမေးလေသည်။သမိန်ဗြာဇ္ဖလည်း
`လူအရည်အသွေးကို မကြည့်ပဲ တပ်ပျက်သူ လဂွန်းအိန် ကိုမြှောက်စား သည်ကို ကြားသောကြောင့် မ၀င်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျုပ်လည်း .. `ကျွန်ုပ် အလျှင် ထွက်တိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နောက်မှ အကူအထောက်မရောက် ရာ ရန်သူစစ်လည်းကြီးသောကြောင့် တောသို့ဝင်ရပါသည်။နော် ဗိုလ်ပါအမျာိးကု ပြန်လည်စုရုံး၍ ပြန်ထွက်တိုက်ခဲ့ပြီး ရသော သုံပန်း၊ဆင်၊မြင်းတို့ကို ဆက်သခြင်းဖြစ်သည်..။`လို့ပြန်လျှောက်တော့ .. သုရှင်က လက်ခုပ်တီး၊ရီတော်မူပြီး….
`ဟယ်.. လဂွန်းအိန် သင့်စကားမှာလူကြီးကိုမရိုသေရာကျသည်။အမတ်သူရဲစကားမဟုတ်။နွားကျောင်းသားပြောသောစကား
နှင့်သာတူသည်။ဒီတစ်ကြိမ်ရှိစေ။နောက်တစ်ကြိမ်ဆိုလျှင် တပ်မှုးချုပ်လက်အပ်ကာ အပြစ်ပေးစေမယ်။` လို့မိန့်ပြီး သမိန်ဗြဇ္ဖ ကိုလည်း စိတ်ပြေကြောင်းဆုလာဘ်များပေးတော်မူတယ်လေ။ အမတ်ကြီး ကိုကြည့်ရတာ မကျန်းမာပုံပဲ ။ကျုပ်ကိုတော့ ဗွေယူပုံမပေါ်ပါဘူး။ သူမကျန်းမာကြောင်းသုရှင်သိတဲ့အတွက် ညီလာခံမှာ အုံးဝန်း (မှီအုံး)ပေးမှီဖို့ရာသုရှင်ကခွင့်ပြုတော်မူတယ်။
နောက်များမကြာမှီ အမတ်ကြီးသမိန်ဗြဇ္ဇလျှောက်တင်ချက်ကြောင့် သုရှင်သည် အနေအထားမကောင်းသော န၀င်းဆိပ်ကို ခွာလျက် တလည်းဆီးတွင် တပ်တည်ရန် စီစဉ်လေသည်။ထိုနေရာကို ဗာရာဏသီ ဟူ၍ခေါ်တွင်စေသည်။ န၀င်းတွင် တပ် ၃တပ်ကိုသာချန်လေ၏ ။ဘုရင်မင်းခေါင်လည်း `ငါမချီလျှင် ပြည်ကို မွန်တို့ရတော့မည်´ဟုဆိုကာ အင်အား ခုနှစ်သောင်း၊ဆင်နှစ်ရာ၊မြင်းသုံးထောင်ဖြင့်ချီလာလေ၏။
အမတ်ကြီးတို့က ထို၃တပ်ကိုပါပြန်ခေါ်ရန် လျှောက်သော်လည်း .. ထို၃တပ် ဗိုလ်မင်းများဖြစ်ကြသော တူတော်ဘော်ကျော်(ဒလစားမညီကံကောင်း၏သား)၊ဗြထဗိုက်နှင့် သမိန်ဇိပ်ဗြဲတို့ ရဲဝံ့စွာ ခံတိုက်ပါမည်ဟုကြွေးကြော်လေရာ သုရှင်လည်း သဘောတူ၍ ထို ၃တပ်ကို ပြန်မရုတ် ပဲထားလေ၏။
သာဝတ္ထိတွင် ပျက်ကာပြေးသော တပ် ၅တပ်မှာ မြေထဲအရောက်တွင် ဘုရင်မင်းခေါင်နှင့် ဆုံ၏။ထိုအခါ ပြန် ပြီးအနိုင်ယူရန် အာမခံပြီး တစ်ဖန် မင်းခေါင်တပ်များနှင့် ချီလာပြန်သည်။နောက် န၀င်းရှိတပ်၃တပ်ကို မနက်စောစော တွင် ရွပ်ရွပ် ချွံချွံ တိုက်ရာ န၀င်းရှိမွန်တပ်များပျက်ပြီး ကြုံးဝါးထားသည့်အတိုင်း အသေခံတိုက်သဖြင့်ဘောကျော် နှင့် ဗြထဗိုက်တို့ကျကာ သမိန်ဇိပ်ဗြဲကို ဖမ်းမိလေသည်။မသေပဲကျန်သော မွန်စစ်သည်တို့ လည်းချောင်းကိုဖြတ်ကူးကာ တစ်ဖက်ကမ်းရှိ ဗာရာဏသီတပ်သို့ကူးကြလေ၏။
ထိုအကြောင်းတို့ကိုသုရှင်သိသောကြောင့် ချောင်းကိုဖြတ်သူတို့အား ကမ်းနဖူးမှသတ်စေဟု အဲမွန်ဒယာအားစေလေသည်။ ထိုအခါ အမတ်ဒိန်နှင့် သမိန်ဗြာဇ္ဖ တို့က မိမိစစ်သည်တို့ကို သတ်ခြင်းမှာ ရန်သူကိုအားပံပေးခြင်းနှင့်တူသည်ဟုဝိုင်းလျှောက်သဖြင့် အမိန့်ကို ပြန်ရုတ်လေသည်။
နောက်တစ်ရက် ညီလာခံတွင် သမိန်ဗြာဇ္ဖက ယခုအင်းဝချီလာသောစစ်တွင် ရိက္ခာအလုံအလောက်မပါ။ထို့ကြောင့် ရိက္ခာရှိနိုင်ရနိုင်သော အထက်ဒေသမှ မြို့ရွာများကို တိုက်ခိုက်ဖျက်စီးလျှင် ရိက္ခာပြတ်လိမ့်မည်အကြောင်းလျှောက်ရာ အကြံကိုကြေိုက်ကြသဖြင့် ပဲခူးမှ သူရဲအများကို စေလွတ်ဖျက်စီးစေ၏။များမကြာမှီ ဘုရင်မင်းခေါင်လည်း တပ်တွင်ရိက္ခာမရသောကြောင့် ငတ်မွတ်လေသဖြင့် တမန်တော်စေကာရာဇာဓိရာဇ်အားစစ်ပြေငြိမ်းမည့်အရေး ဆိုလာလေသည်။ထို့ပြင် အမတ်ကြီး သမိန်ဗြာဇ္ဖကိုလည်း တွေ့မြင်လိုသည်ဟု
စစ်ပြေငြိမ်းကြောင်းကိုဆွေးနွေးရန် ငါသဘောတူပြီ။” ဟုဆိုကာသမိန်ဗြာဇ္ဖကို သံအဖြစ်ပြန်စေလွတ်သည်။
ဘုရင်မင်းခေါင်လည်း အမတ်ကြီးသမိန်ဗြာဇ္ဖကိုတွေ့လျှင် ချီးမွမ်းတော်မူပြီး “ငါ့အစ်ကို ပိန်စွတကား”ဟုပြောလေရာ သမိန်ဗြာဇ္ဖကလည်းမ ကျန်းမာကြောင်းလျှောက်တင်၏။နောက် “အမတ်ကြီး သည်ဆင်ကျော့(ဆင်ဖမ်း) အလွန်ကောင်းကြောင်းပြောကြသည်။’ဟုပြောရာ သမိန်ဗြာဇ္ဖက “ဆင်ယဉ်ကိုကျော့ပြသည်မှာ အကျိုးမရှိ၊တောဆင်ရိုင်းရှိလျှင်ကျော့ပြနိုင်သည်။”ဟုပြန်လျှောက်ရာသဘောကျလေသဖြင့် အမတ်ကြီးကိုချီးမွမ်းပြီး ဆုလာဘ်များ၊လက်ဆောင်များလည်းပေးပြန်သည်။နောက် မင်းနှစ်ပါးတို့ မြသီတင်းဘုရားတွင်အတူတစ်ကွ သစ္စာဆိုကြလေသည်။လက်ဆောင်များအပြန်အလှန် ဆက်ကာချစ်ကြည်ရင်းနှီးကြလေသည်။ ထို့အပြင် ဗဒင်ရမ္မတောင် နှင့် ကြုံလှာ ကိုနယ်ခြားထားကာ အထက်ကို အင်းဝပိုင် ၊အောက်ကို ပဲခူးပိုင် အဖြစ်သဘောတူလေ၏။ရာဇာဓိရာဇ်ကဘုရင်မင်းခေါင်တွင် မိမိသမီးတော်တလမေကျော်ရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့်မိမိနှင့်မင်းခေါင်နှမတော် မင်းလှမြတ်ကို စုံဖတ်ပေးစေလိုကြောင်း၊အပြန်အလှန်အားဖြင့် ပုသိမ်သဘောင်္ဆိပ်မှ နှစ်စဉ်ရသောအခွန်တို့ကို အင်းဝသို့ဆက်မည့်အကြောင်း၊ဗာရာဏာသီတွင်ရှိသောတပ်ကိုမိမိဂုဏ်သိက္ခာမညိုးနွမ်း
နောက် တပ်ကို ရုတ်ကာအင်းဝနှင့် ဟံသာဝတီ သို့အသီးသီးပြန်ကြလေ၏။
မကြာမှီ ဘုရင်မင်းခေါင်က မှုးမတ်များအား ဗာရာဏသီတပ်အကြောင်းမေးရာ တပ်မရုတ်သေးကြောင်းသိလေသဖြင့် ရာဇာဓိရာဇ်ကို အမျက်ထွက်ကာ ဇင်းမယ်(ချင်းမိုင်)မင်းထံ မဟာမိတ်ဖွဲ့မည့်အကြောင်း၊မိမိဦးစွာ ရခိုင်နှင့် ဗန်းမော်ရှမ်းတို့အားချီတက်တိုက်ခိုက်မည့်
အကြောင်း၊ပြီးလျှင်မိမိတို့မင်းနှစ်ပါး ဟံသာဝတီကို စစ်နှစ်ဖက်ညှပ်တိုက်ခိုက်ကာ အရယူမည့်အကြောင်း ရာဇသံတွင်ရေးပြီးပုိ့လေသည်။
ထိုတမန်တော်တို့ကို မွန်ကင်းတပ်သားများက မသက်ာရှိပြီးဖမ်းကာစစ်ရာ အကြောင်းစုံကို သိပြီး သုရှင်ထံသို့ပို့လေ၏။
ရာဇာဓိရာဇ်လည်း မင်းခေါင်သည် သစ္စာမရှိဟုအမျက်ထွက်ကာ တမန်တော်များကို ကွပ်စေသည်။နောက် ဘုရင်မင်းခေါင် ရခိုင်သို့ချီ မချီ စုံစမ်းစေပြီး ချီကြောင်းကိုသိလျှင် ပုသိမ်သို့ချီတက်တပ်စွဲကာ အပြန်တွင်လမ်းမှ ဖြတ်တိုက်မည်ဟုကြံလေသည်။ဘုရင်မင်းခေါင် လည်း ရခိုင်ရှိသံတွဲနှင့် မြောက်ဦး ကိုသိမ်းပိုက်ပြီး သမက်တော် ဂါမဏိ နှင့်သမီးတော် စောပြည့်ချမ်းသာ တို့ကို အစောင့်ထားကာ ဗန်းမော်သို့ ကုန်းကြောင်းမှ အမြန်ချီတက်သွားလေသည်။ ရခိုင်ဘုရင့်သား နရမိတ်လှ လည်းမွန်တို့ထံ ခိုဝင်လာပြီးအကူအညီတောင်းရာ သုရှင်က “သူ့သားငါ့သားနှယ်မဟူ။အတူတူပင်ဖြစ်တော့သည်။ မင်းအဖ၏ အရိုက်အရာကို ငါပြန်ယူပြီးမင်းကို ချမ်းသာပြန်ရစေမည်။”ဟုအာမခံကာ တပ်နှစ်တပ် တွင် သမိန်ငေါခွင် နှင့် သမိန်ဗိုက်ညက် တို့ကို အကြီးအမှုးခံပြီး စေလွှတ်တိုက်ခိုက်စေ၏။ရခိုင်သားတို့လည်း မိမိတို့အရှင်သခင်၏သား ပြန်လာလေပြီဟုကြားကာ အများအပြားပင် လာရောက် ခစားအမှုထမ်းကြလေသောကြောင့် သံတွဲကိုအလွယ်
တကူရကာ မြောက်ဦးသို့ဆက်လက်ချီတက်လေ၏။ နောက် မြောက်ဦးတွင်လည်း အနိုင်ရပြန်ရာ အင်းဝဘုရင်၏ သားမက်နှင့်သမီးတော်
တို့ကို ဖမ်းဆီးရမိကာသုရှင်ထံသို့အစောင့်များဖြင့်ပို့သည်။ မြောက်ဦးတွင် နရမိတ်လှအား နန်းတင်ပြီးမွန်တို့လည်းပြန်လေ၏။
ဘုရင်မင်းခေါင်၏သားမက်တော် ဂါမဏိ လည်းပုသိမ်တွင်အဆိပ်သောက်၍သေလေသည်တွင် စောပြည့်ချမ်းသာအား သုရှင်မှ မိဖုရားမြှောက်၏။ရခိုင်ပျက်ပြီး သမီး၊သားမက်တို့ကို ရာဇာဓိရာဇ် ရသည့်အကြောင်းကို ဗန်းမော်ရှမ်းတို့အား တိုက်ခိုက်လျှက်ရှိသော ဘုရင်မင်းခေါင်သိလျှင်`သည်ဗန်းမော်ရှမ်းတို့ပုန်ကန်သောကြောင့်ငါလာနှိမ်နှင်းရသည်။ငါ့သမီးတော်နှင့်သားမက် တို့ကိုရန်သူရလေပြီ။
ဒီဗန်းမော်ရှမ်းတို့ကြောင့်သာ။သင်းတို့အားလုံးကိုခုတ်၍ရေမှာဖျောက်စေ။..´ဟုမိန့်လေရာရဲမတ်တို့လဲ ရှမ်းတို့ကိုကွပ်လေ၏။နောက် `ဗညားနွဲ့ကိုမရလျှင်ငါမပြန်၊ရအောင်ယူမည်။…..´ဟုဆိုကာအင်အား တစ်သိန်းငါးသောင်း၊ဆင၊်မြင်းအပြည့်အစုံဖြင့်တောင်ငူကြောင်း
ရာဇာဓိရာဇ်လည်း မင်းခေါင်စစ်ချီလာသည်ကိုကြားလျှင် စစ်တောင်းသို့ချီတက်တပ်စွဲလျက်နေလေသည်။နောက် အင်းဝစစ်အခြေအနေ
ကိုသိရရန် လဂွန်းအိန် အားချီတက်ထောက်လှမ်းစေသည်…။တောင်ငူအရောက်တွင် ….
အသံတွေကြားတာနဲ့ ရဲမက်တစ်ယောက်ကို သစ်ပင်ထက်ကိုတက်ပြီး စူးစမ်းစေတော့..အင်းဝစစ်ဟာကျုပ်တပ်နဲ့ရှေ့မနီးမဝေးမှာ ရောက်နေတယ်တဲ့လေ။ ကျုပ်လည်း ပါလာတဲ့ စစ်သည်၅၀၀ကို နှစ်စုခွဲပြီး တော်တွင်းမှာပုန်းနေစေတယ်။ကျုပ်တို့ပုန်းအောင်းနေတဲ့ အနားကိုရောက်မှသေချာကြည့်မိတယ်။ရှေ့ဖျားကချီတဲ့ရှမ်းစစ်သည်တွေကိုပဲ မနည်းတာတွေ့ရတာနဲ့ကျုပ်ရဲမက်တွေကိုအပြင်းပဲတိုက်
စေလိုက်တယ်။အစဦးတော့ ရန်သူတွေလည်းအငိုက်မိပြီး ၀ရုန်းသုန်းကားဖြစ်သွားကြပေမယ့်နောက်ကစစ်မကြီးလိုက်မှီလာတဲ့ အချိန်ကြတော့ ကျုပ်တို့မခံနိုင်လို့ တောလမ်းကပဲပြန်ဆုတ်လာခဲ့ရတယ်။
ရှမ်းချည်းသပ်သပ်ချီသောအင်အားကိုမသေးကြောင်း၊နောက်တပ်မကြီးအပါအ၀င်ဆိုလျှင် တစ်သိန်းကျော်မျှရှိနိုင်ကြောင်း တွေကိုပေါ့။ သုရှင်လည်း ကျုပ်ကိုအနားပေးပြီး အမတ်ကြီး သမိန်ဗြာဇ္ဖကို မိန့်တယ်။ `ဒီတစ်ခါ ငါ့မြေကို မင်းဆွေ(မင်းခေါင်၏ငယ်နာမည်) မနင်းစေရ။သူ့ကိုငါစီးကြိုကာတိုက်မည်။အမတ်ကြီးအသင့်ပြင်ဆင်လော့။…´ဟုဆိုပြီးတောတွင်းမှဖြတ်တိုက်ရန်စီစဉ်စေတယ်။နောက်အ
လှကြောင်းကိုပြန်ဖြေတော့ အမတ်ကြီးက ´ယခု အင်းဝချီလာသောစစ်သည် အင်အားအထူးပင်များလှသည်။ တောတွင်းမှ တိုက်မည်ဆိုသော်လည်း ရန်သူစစ်ဦး၊ကျွန်ုပ်တို့စစ်ဦးတို့မှာ စစ်ဦးဘီလူး ဟူသကဲ့သို့ရှိနေသောကြောင့် တိုက်လျှင် နှစ်ဖက်လုံးပင်ပန်းချိမ့်မည်။ထို့ကြောင့် သူ့စစ်ကို တောတွင်း၌သာနေစေပြီး၊ကျွန်ုပ်တို့ တပ်များကိုမြို့တွင်းသာနေစေမည်။အားရှစေမည်။ ထိုနောက်မှ ရန်သူကိုတိုက်လျှင် အလွယ်တကူနိုင် နိုင်လိမ့်မည်။ပင်ပင်ပန်းပန်းတိုက် ကာနိုင်လျှင်အကျိုးမရှိ..။´လို့ပြောတော့ သုရှင်က သဘောတူပြီးတပ်ကို စစ်တောင်းသို့ပြန်ဆုတ်ခဲ့တယ်။
ဘုရင်မင်းခေါင်လည်းတောတွင်းတွင်ဟံသာဝတီတပ်ရှိနေမည်အထင်နှင့်တောကိုမဖြတ်သေးဘဲ လွင်၌တစ်ပတ်မျှ အနားယူစေသည်။
ရာဇာဓိရာဇ်လည်း စစ်တောင်းတွင် ရှိသော ရိက္ခာ၊စပါး တို့ကို မီးတိုက်ဖျက်စီးစေပြီး ပန်းကျော် ထိဆုတ်ကာတပ်တည်လေသည်။နောက်
ဘုရင်မင်းခေါင်မှီလာသော် စစ်နှစ်ဖက် မျက်နှာချင်းဆိုင်ကာ တပ်များတည်ပြီး ပဲခူးတပ်နှင့်တည့်တည့်တွင် ရှမ်းတို့ကိုထားလေသည်။ ပဲခူးသားတို့မှာရေကျွမ်းကျင်ပြီး၊ရေကျရေတက် (ဒီရေအတက်အကျ)ကိုနားလည်သူများဖြစ်သဖြင့်ထိုအရာကိုနားမလည်သောရှမ်းတို့ကို
လှည့်စားကာရေမတက်ခင်တွင်ချောင်းလုံးပြည့်မျှဆင်းကာစိန်ခေါ်ပြီးရေတက်လာလျှင် အလျင်အမြန် ကမ်းပေါ်သို့တက်ပြေးသောကြောင့်
မသိသောရှမ်းသူရဲများ လည်း ရေနှစ်ကာ သေကြလေသည်။
နောက်ရက်အတန်ငယ်ကြာလျှင်ယခင်အကြိမ်အတိုင်း အင်းဝတပ်ရိက္ခာလမ်းကြောင်းကိုသမိန်အ၀နံနိုင် ကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်စီးစေရာ၊အင်းဝ
တပ်တွင် ရိက္ခာ အခက်ကြုံပြန်လေသည်။ ရာဇာဓိရာဇ် လည်းသမိန်အ၀နံနိုင်ကိုချီးမွမ်းတော်မူပြီး သမိန်အ၀မင်းကြီး ဟုဘွဲ့တိုးချီးမြှင့်လေ
၏။ ဤတွင် ဘုရင်မင်းခေါင်က အင်းပဲသူကြီးကိုစေလွတ်ကာ သမီးတော်ကို သင့်တော်သော် ရာဇာဓိရာဇ်၏ သားတော်များအနက် တစ်ပါးပါးနှင့် စုံဖက်စေပါက စစ် နုတ်ကာပြန်ပါမည့်အကြောင်းအရေးဆိုလာတော့သည်။ရာဇာဓိရာဇ်လည်း အကောက်ကြံလျက် နှစ်ဖက် အမှုးအမတ်များ ကိုသစ္စာပြုစေမည့်အကြောင်း ပြီးလျှင် စစ်ပြေငြိမ်းမည့်အကြောင်း၊သစ္စာပြုမည့်အချိန်နေရာတို့ကိုအင်းပဲသူကြီး ကိုပြန်မိန့်ကာ မင်းခါင်အားလျှောက်စေသည်။ ရာဇာဓိရာဇ် ကြံသည်မှာ သစ္စာပြု ပြီးလျှင် အမှုးအမတ်တို့မှာ တစ်ဖက် ဘုရင်များစီသို့သွားကာ အခစားဝင်ဖူးမျှော်ကြမည်။ထို့ကြောင့် မွန်တို့ အင်းဝဘုရင်ထံသွားမည့်လမ်းတွင် လက်နက်၊ဓါးလှံများကိုဝှက်ထားပြီး အခစားဝင်ဟန်နှင့် မင်းခေါင်အားလုပ်ကြံစေမည်။ နောက် မွန်တပ်သို့လာကြသောအင်းဝ မြန်မာ အမှုးအမတ်တို့ ကိုတပ်တွင်းအရောက်တွင် ဖမ်းကာသတ်မည် ဟူ၍ဖြစ်လေသည်။ နောက် အကြံအတိုင်း အစီအစဉ်ကို အမတ်၊စစ်သူကြီး များအားပြောကာ သစ္စာပြုမည့် သဲသောင်ပြင်အနီးတွင် လက်နက်တို့ကိုဝှက်ထားစေ၏။ နောက် အချိန်တန်လေသော်အခါမွန်၊မြန်မာ အမတ်သေနာပတိပေါင်း ၆၀ တို့သည် ၂ယောက်တွဲ တွဲကာ သစ္စာပြုရန်နေရာတွင်နေရာယူလေသည်။အတွဲပေါင်း၃၀ တိတိဖြစ်သည်။ ရှေ့ဆုံးတွင် မွန်ဖက်မှ သမိန်ဗြာဇ္ဖ နှင့် မြန်မာမှ မြင်စိုင်းစာ မင်းသား သရေစည်သူ ၊နောက်တွင် အမတ်မဟာသမွန် နှင့် မင်းမဟာရာဇာ(မင်းရာဇာ)အစရှိသည်ဖြင့် ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်စီရာ နောက်ဆုံးတွင် အငယ်ဆုံးဖြစ်ကြသော လဂွန်းအိန်နှင့် မိုးညှင်းသတိုး တို့ဖြစ်ကြလေသည်။
အမတ်ကြီးများက ကျုပ်တို့အတွဲကိုကြည့်ပြီးရယ်သွမ်းကြတယ်။ရီချင်လည်းရီချင်စရာပေပဲလေ။ ကျုပ်က လက်ခွင်ပြီး၊သတိုးက ခြေခွင်နေတာကိုးဗျာ။နောက် အမတ်တွေ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန်လက်ဆောင်တွေလဲလှယ်ကြပြီး စကားတွေပြောနေချိန်ကြတော့
ကျုပ်လည်း နဂိုကမှ သုရှင်နဲ့အကြံကို သိပ်သဘောမကြလှတာနဲ့`ဟယ်..သတိုး၊အရှုး၊စစ်တို့၏သဘောတွင်သစ္စာမှန်သည်ဟုရှိဘူး
သလော။ ငါ့ကိုနင်ရလျှင်လည်းသတ်မည်။နင့်ကိုငါရလျှင်လည်းသတ်မည်သာပင်စစ်အတွင်းပြုသည့်သစ္စာကို မှန်သည်ဟုမင်းယုံသ
လော..။`လို့ပြောလိုက်တော့ သတိုးလည်း ရှေ့ဆုံးက သရေစည်သူ စီကိုပြေးသွားပြီး ပြောတာနဲ့ သစ္စာပြုပွဲပျက်လို့ပြန်ကြတယ်။
နောက်စခန်းပြန်ရောက်လျှင် သုရှင်မေးသော် လဂွန်းအိန်ကြောင့် သစ္စာဆိုပွဲပျက်ကြောင်းသိလျှင် အလွန်အမျက်ထွက်၍ `လဂွန်းအိန်အား ခြေလက်တို့ကိုဖျက်၍သတ်စေ။´ ဟုသေဒဏ်ပေးလေသည်။အဲမွန်ဒယာအားသတ်စေ၏။
အဲမွန်ဒယာလည်းကျုပ်ကို ဆွဲထုတ်လာပြီး ..´သွေးသောက်.. ကျွန်ုပ်လည်းယခုချိန်တွင် သုရှင်အမျက်ကြီးနေချိန်ဖြစ်သောကြောင့် သုရှင်အားမလျှောက်ရဲ…။သို့ကြောင့် သွေးသောက်ကသုရှင်ကိုကျေနပ်အောင်ချေပ နိုင်လျှင်ငါမသတ်၊အချေနိုင်လျှင်တော့သတ်ရမည်သာ..´လို့ပြောပြီးကျုပ်ကိုမသတ်သေးပဲချန်ထားပေးတယ်။
အမတ်ကြီး သမိန်ဗြာဇ္ဇ နှင့်အမတ်ဒိန်တို့လည်း.. `လဂွန်းအိန် သည်ထူးချွန်သော စစ်သူရဲဖြစ်သည်။ယခုကဲ့သို့ ရန်သူနှင့် စစ်ရင်ဆိုင်ချိန်တွင်သတ်ပါက အစားထိုးရန်ခက်လှသည်။တစ်ဖက်ရန်သူကို အားပံ့သည်နှင့်အတူတူ။´ဟုဝိုင်းလျှောက်ကြရာ ရာဇာဓိရာဇ် က `အခြားသူရဲကောင်း အစားထိုးရန်မရှိလျှင် ၊ငါကိုယ်တိုင် သူ့နေရာဝင်မည်။သတ်တော့။´ ဟုမိန့်၏။
အမတ်ကြီးနှစ်ပါး လည်းလဂွန်းအိန်ကို မသတ်စေလို၍..`အရှင်မင်းကြီး ၊လဂွန်းအိန်သည် ဤမျှလောက်ကြီးသော အကြံကိုဖျက်သည်မှာ သူ့တွင် အကြောင်းယုတ္တိ တစ်ခုခုရှိလိမ့်မည်။သူ့ကိုယခုခဏခေါ်ကာကျွန်တော်မျိုးတို့မေးပါဦးမည်။အကယ်၍ အကြောင်းဥပဒေ နှင့်ညီညွတ်လျှင် အသက်မှလွတ်သင့်ပေသည်။ အကယ်၍အကြောင်းမှန်မရှိလျှင် ကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုယ်တိုင် စီရင်ပါမည်။´ ဟုဝိုင်းလျှောက်ကြလေသည်..။ရာဇာဓိရာဇ်လည်းမည်သို့မှ မဆိုပဲ ဆိတ်ဆိတ်နေရာ အမတ်ကြီး နှစ်ပါးတို့လဲ လဂွန်းအိန်ရှိရာ င်္သချိုင်းသို့လိုက်လေ၏။
ကျုပ်လဲ .. သေခါနီး ဘုရား၊တရား အာရုံပြုနေချိန်မှာ အမတ်ကြီးနှစ်ပါး ရောက်လာပြီး ကျုပ်ကို ပြန်လာခေါ်တော့ အံ့သြသွားပါတယ်။
နောက် တပ်ကိုပြန်ခေါ်သွားပြီး သုရှင်ရှေ့ကို ပြန်သွင်းပြီးမေးတော့ ကျုပ်လည်း ဘာမှ ပြောမထွက်ဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲဒီအချိန်မှာ အမတ်ဒိန်က ` အမတ်ကြီး.. သုရှင်ရှေ့မှာ ဒီလိုစစ်လျှင် သူဆိုတတ်မည်လော။ အမတ်ကြီးတပ်ကိုခေါ်သွားစစ်ဆေးပြီးမှ ကျွန်ုပ်တို့
သုရှင်ကိုပြန်လာလျှောက်မှ တော့မည်။´လို့ပြောပြီး ကျုပ်ကို သမိန်ဗြာဇ္ဇ တပ်ကိုခေေါ်လာပြီးရေချိုးစေတယ်။ခဏနားပြီးတော့မှ
အမတ်ကြီးနှစ်ယောက်လဲ ကျုပ်ကို အကျိုးအကြောင်းမေး တော့တယ်။ကျုပ်လည်း…
` သတိုးကမေးချိန်တွင် ကျွန်ုပ်စဉ်းစားမိသည်။ မြန်မာတို့သည် ရိက္ခာပြတ်နေလေပြီ။မကြာမှီစစ်ရှူံးတော့မည်။ သူတို့စစ်ရှူံး၍နောက်မှ
အလွယ်တကူ လိုက်တိုက်ကာအနိုင်ယူလျှင်တရားသည်။ ယခုတွင် မဖြောင့်မမှန်သစ္စာပြုယောင်ဆောင်ကာ အနိုင်ယူလိုပြီးကျွန်ုပ်တို့ကြံ
သည်။ ရှေးက ဟံသာဝတီတွင် သိကြားမင်းဖန်ဆင်းသည့် အောင်မြေလည်းရှိသည်။ တရံအခါကလဲ အသားမင်းသားသည် ရန်သူ ကို တရားသောနည်းလမ်းဖြင့် အနိုင်ယူရန်မစဉ်းစားပဲ ဥပါယ်အကောက်ကြံ ပြုကာ အနိုင်ယူခဲ့သည်။ထို့ကြောင့် ဥပါယ်ဂို့ (ဥပါယ်ဖြင့်
အောင်မြင်သည့်မြို့/နောင်တွင်ထိုအသံထွက်မှပဂိုး(ပဲခူး)ဟုဆင်းသက်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။)ဟုခေါ်သွင်ကြသည်။ယခုလည်း ရန်သူအင်းဝစစ်ကို စဉ်းလဲကာ ဥပါယ်ပြုပြီးအနိုင်ယူလျှင် ပဂိုး(ပဲခူး)အမည်ကိုဖျက်၍ မည်သို့၊မည်သည်ဆက်ပြီးခေါ်ရမည်ပင်မသိ။ ယင်းကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တွေးမိ၍ လျို့ဝှက်ချက်ကိုဖျက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။´..လို့ကျုပ်ပြောတော့ အမတ်ကြီးနှစ်ပါးလဲ ´သို့ဆိုလျှင် အင်းဝစစ်ကိုတရားသော အကြံဖြင့် နိုင်ရန် မင်းတာဝန်ယူမည်လော။`လို့မေးတော့ ကျုပ်လည်း ..`ကျွန်ုပ်တစ်ဦးတည်းဆိုလျှင်မစွမ်း
နိုင်ပါ..´လို့ပြန်ဖြေတဲ့အခါ အမတ်ကြီးတို့ကလဲ `ဒီလိုဆိုမင်းအသက်မကျွင်းတော့ပြီ။´လို့ပြောတယ်။ကျုပ်လည်း ` အမတ်ကြီးနှစ်ပါးတို့ အကြံညွှန်ပြလျှင် တစ်ဝေမတိမ်း ကျွန်ုပ်လိုက်ပါမည်။သို့မှမဟုတ်လျှင် ကျွန်ုပ် မှာသေလူပင်ဖြစ်တော့သည်။´ လို့ပြန်ပြောတယ်။
ဒီအချိန်မှာ အမတ်ဒိန်က `ယင်းဆိုလျှင် မင်းကို သူရဲလေးရာပေးမည်။ မင်းကိုယ်တိုင်ဆင်စီး၍ မောလင်တော တွင်ပုန်းချေ။ အင်းဝရွှေနန်း
ရှင်သည် ညစဉ်ညတိုင်း အဖိုးဒနီရဲ ချောင်းတိုင်အောင် ကင်းလှည့်လေ့ရှိသည်။ ဆင်မြင်း အပေါ့အလျော့နှင့်သာလာလေ့ရှိသည်။သူရဲ
သူခက်များစွာမခေါ်လာတတ်။မောလင်တော အရောက်တွင်မင်းထွက်တိုက်ပါ။မင်းခေါင်ကို မင်းရလိမ့်မည်။ ..`လို့အအစီအစဉ်ချပေး
နောက်ကျုပ်ကို သုရှင်ရာဇာဓိရာဇ် ရှေ့ကိုပြန်ခေါ်သွားပေးပြီး အကြောင်းစုံကိုပြန်လျှောက်တော့ သုရှင်လည်းပြုံးတော်မူပြီး`ဆင်ဖြူတော်
အသိဏ္ဏရာဇ် ကိုပေးစေ။ လဂွန်းအိန် ရှေ့ကတိုက်၊ ငါကိုယ်တော်တိုင်လည်း နောက်မှတပ်ဖြင့် လိုက်ချီမည်။တံပိုးခရာမှုတ်လျှင် ငါမင်း
ထံစစ်ကူချီလာမည်။..´လို့မိန့်တယ်။နောက်ဆင်ဖြူတော်ကို ယူဖို့ရာသွားတော့ ဆင်ဖြူတော် ကမုန်ယိုနေချိန်နဲ့တိုးပါတော့တယ်။
ကျုပ်လဲ သုရှင်ကိုဦးချရှစ်ခိုးပြီးတာနဲ့ ကြံပိုင်းကိုယူပြီး ဆင်ဖြူတော် အနားကပ်သွားပြီး ကြံကျွေးတယ်။ ဆင်ဖြူတော်က လဲကျုပ်
ကိုယ်နံကိုမှတ်မိလေတော့ အသာတစ်ကြည်ပဲ ကြံကိုစားတယ်။ နောက် ကျုပ်က ဆင်တော်ကို ထူးဖြုတ်ခိုင်းတော့ ဆင်ဦးစီး တွေလဲ အနားမနေရဲပဲ ထူးဖြုတ်ပြီးတာနဲ့ အဝေးမှာပဲနေ ကြတယ်။ ကျုပ်လဲ `စွပ်၊စွပ်´ လို့အသံပေးပြီး ဆင်တော်ပေါ်ကိုခုန်တက်တော့ မုန်ယိုနေတဲ့အတွက် ကျုပ်ကို အတက်မခံဖြစ်နေတယ်။ခါချတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါနဲ့ကျုပ်လဲ ချွန်းနဲ့ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ၅/၆ချက်လောက် နာအောင်ဆက်ခါဆက်ခါပေါက်တော့မှ ငြိမ်သွားတော့တယ်။
ကျုပ်လည်း ဆင်တော်ကို ၃/၄ ပတ်လောက် သုရှင်ရှေ့မှာစီးပြလိုက်တော့ သုရှင်လည်းကျေနပ်ပြီး ..`သက်ချေတော့..။´လို့မိန့်လို့
ကျုပ်ဆင်ပေါ်ကဆင်းပြီးဦးခိုက်တယ်။ နောက် ကျုပ်လဲ ..`ယခု အင်းဝစစ်သည်များသည် သျှိသျှားသစ်သီးများ မြေတွင် ပြန့်ကျဲနေသ
ကဲ့သို့ပင် သေသူ၊နာသူများ၍ စိတ်ဓါတ်လည်းကျနေပေပြီ။ကျုပ် မသံလုံ တိုက်လျှင် ခံနိုင်မည်လော..´လို့ကြွေးကြော်တော့ သုရှင်လည်း အားရလွန်းတာနဲ့ ကျုပ်ကို မဟာစောလဂွန်းအိန် ဆိုတဲ့ဘွဲ့ကို တိုးမြင့်ချီးမြှောက်တော်မူတယ်။ရွေပြားခတ်ဖို့ရာအချိန်မမှီတော့ သုရှင်ကိုယ်တိုင် လက်နှင့်နဖူးပေါ်မှာရေးပေးတော့ ကျုပ်က`သုရှင်၏လက်ရေးတော်ကို နဖူးထက်တွင်တင်ရပြီ။ကျွန်ုပ်အတွက်ရွှေပြားခတ်
ရန်မလိုပြီ..။´လို့လျှောက်တယ်။ နောက် သုရှင်က ကိုယ်တော်မှာစွဲထားတဲ့ ရခိုင်ငှက်ပျောသီးအရွယ်ရှိတဲ့ ရှေးဟောင်းဝက်စွယ်ကို ကျုပ်ကိုယ်မှာစွဲပေးပြီး .. `ဤ၀က်စွယ်ကိုမင်းစွဲလျှင် မင်းမပြောနှင့် မင်းစီသောဆင်မြင်းကိုပင်ရန်သူက မခုတ်မရှနိုင်စေရ..။`လို့
မိန့်တယ် နောက်ကျုပ်မယား နှင်းကေသရာ ကိုလည်း အင်းဝကိုပါတဲ့ သုရှင်ရဲ့သမီးတော် တလမေကျော် အမည်နဲ့ ဘွဲ့ချီးမြင့်သေးတယ်။
စစ်ထွက်ခါနီးကျ ကျုပ်က မင်းခေါင်ကိုမသိ၊မမြင်ဘူးလို့ သိသူကိုကျုပ်နဲ့ထည့်ပေးဖို့လျှောက်တော့ သုရှင်က မင်းသိဒ္ဓတ်ကို ခေါ်ပြီး ..`မင်းသိဒ္ဓတ်..မင်းကို အကျိုးပေးချိန်တန်ပြီ။မင်းနောင်တော်ကို လဂွန်းအိန်ဖမ်းပေးမည်လို့အာမခံသည်။သို့ရာမင်းခေါင်ကိုသူမသိ။
မင်းကိုယ်တိုင် ကုန်းလယ်မှ စီးပြီး မင်းခေါင်ကိုပြပါ။ဤအကြံကြီးအောင်လျှင် ကိုယ်တိုင် အင်းဝထိချီပြီး မင်းကို ရွှေနန်းထက်သို့တင်မည်။
ပြီးလျှင် ဘုရားစုံဖူးကာ ငါပြန်မည်။..´လို့မိန့်ပြီး မင်းသိဒ္ဓတ်ကို ကျုပ်နဲ့ ဆင်တစ်စီးတည်း လိုက်ပါစေတယ်။
ထိုသို့ဖြင့် လဂွန်းအိန် တပ်ထွက် သည့်နောက်တွင် ရာဇာဓိရာဇ် ကအနံလောင်ဆင်ကိုစီးပြီး သူရဲရှစ်ရာနှင့်လိုက်သည်။အမှုးအမတ်များ
စီးပြီးထွက်မြဲအတိုင်းထွက်တော်မူလေသည်။ဆင်တော် ရဲမြတ်စွာ နှင့်မှုးမတ်တော်တို့လည်း နောက်မှ ဖြည်းညှင်းစွာသာလိုက်လေ၏။
ကျုပ်တို့တပ်နားကို ဘုရင်မင်းခေါင် အပေါ့အလျှော့နဲ့တပ်သိပ်မပါဘဲကပ်လာတော့ ကျုပ်လည်း ဆင်တော်ဗကမတ် ကိုချွန်းဖွင့်ပြီး စည်မောင်းတီးလို့ကြွေးကြော်ပြီးတောအကွယ်ကနေအမြန်ထွက်တိုက်တယ်။ဘုရင်မင်းခေါင်လည်း ကျုပ်တပ်ထွက်တာလဲတွေ့ရော၊
ဆင်တော်ရဲမြတ်စွာပေါ်ကိုအမြန်တက်ပြီး ညှာသံပြေးလို့ အပြင်းပဲချွန်းဖွင့်ပြီးလာတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဘယ်ကထွက်လာမှန်းမသိတဲ့ အင်းဝကဆင်စီးအမတ်တစ်ယောက် ကကျုပ်ကိုကြားကဖြတ်တိုက်ပါတော့တယ်။ ကျုပ်လည်းအားကောင်းတဲ့ဆင်ကိုစီးနေရတော့ အဲဒီ ရန်သူဆင်ကို ဦးလှည့်ပြီးဆင်ချင်းဝှေ့စေတော့မှ ပြည်စားတရဖျားမှန်းသိတော့တယ်။ဒါပေမယ့် သင်းဆင်က အားချင်းယှဉ်လို့မှ ကျုပ်စီးတဲ့ ဗကမတ်ကို မနိုင်လေတော့ သူ့ဆင်လဲတာပေါ့။သူ့ဆင်လဲတာနဲ့ ဘုရင်မင်းခေါင်ဆင်က ဆက်ကာဝင်လာတော့ ကျုပ်လည်းတိုက်မယ်ဆိုပြီးချွန်းဖွင့်ချိန်လေးမှာပဲ ကျုပ်ဆင်ပေါ်က မင်းသိဒ္ဒတ် ကမြန်မာလိုလှမ်းပြီး အော်ဟစ်ပါတယ်။ကျုပ်လည်း မြန်မာစကားကို အရမ်းမဟုတ်တောင် နည်းနည်းပါးပါးတော့နားလည်တော့ သူပြောတာ သိတယ်။ “မင်းဧကရာဇ်ဖြစ်ရက်နဲ့ မှုးမတ်သူရဲနှင့်သာတိုက်လေသလော။နောက်တပ်တွင်အကူများသည်။တိုက်နိုင်မည်မဟုတ်။ခွာတော့။”…တဲ့။စကားအဆုံးမှာမင်းခေါင်လည်း
လှည့်ပြေးပါတော့တယ်။ကျုပ်လည်းအံ့သြသွားတာပေါ့။ဒါပေမယ့် ရှေ့က ရန်သူဘုရင်မင်းခေါင်ကိုပဲ မဲပြီးလိုက်နေတော့ နောက်က မင်းသိဒ္ဒတ်ကို လှည့်ပြီးမပြောနိုင်ဖြစ်နေတယ်။နောက်မှီလာခါနီးကျပြန်တော့လည်းကျုပ်ကမင်းခေါင်ဆင်ပေါ်က ထီးဖြူကို မှတ်ပြီးလိုက်မှန်းသိပြန်တော့မင်းသိဒ္ဒတ်က”အင်းဝတွင်အ၀တ်ဖြူရှားရလေသလော။..”လို့ထပ်အော်ပြန်တယ်။မင်းခေါင်လည်းအခြားထီးဖြူ
ဆောင်းတဲ့မြို့စားတွေရှိရာကို ၀င်သွားတော့ ကျုပ်လည်း မင်းခေါင်ဆင်ကို မှတ်မရနိုင်တော့တဲ့အပြင်၊အဲဒီတပ်တွေကဖိဝင်လာတာကြောင့် မခံနိုင်တော့ဘဲပြန်ဆုတ်ပြေးရတော့တယ်။
ကျုပ်တပ်ဆုတ်ပြေးလာတာကိုမြင်တဲ့ သုရှင်တပ်ရဲ့ရှေ့ဖျားမှာချီတဲ့ သမိန်ဗိုက်ည က”ဟယ်..လဂွန်းအိန်၊ပသို့ကြောင့်ကြောက်အားလန့်
အားနှင့်ပြန်ဆုတ်ရသနည်း..” လို့လှမ်းမေးတော့ ကျုပ်လည်း မင်းသိဒ္ဒတ် သစ္စာမဲ့လို့ဖြစ်ရကြောင်းပြန်ဖြေလိုက်တယ်။သမိန်ဗိုက်ည လည်း အကြောင်းစုံကို သုရှင်ဆီလျှောက်တင်လေတော့ အမျက်ပြင်းစွာထွက်တော့တယ်။
ရာဇာဓိရာဇ် ၏အသံသည် ဒေါသကြောင့် တုန်ခါနေသည်။မင်းသိဒ္ဒတ်လည်း “ကျွန်ုပ်သည် ညီအစ်ကိုရင်းဖြစ်သော သူ့ကို အသက်ပျက်စီး
မှုမဖြစ်စေလိုသောကြောင့် သတိပေးရဖြင်းဖြစ်သည်။နောင်တွင် အင်းဝသားတို့ကျွန်ုပ်ကို နောင်တော်အားသတ်ကာမင်းပြုသည်ဟု ဆိုစမှတ်ပြုလိမ့်မည်ကိုလည်းစိုးသည်။” ဟုပြန်လျှောက်ရာ ရာဇာဓိရာဇ်က “မင်း အင်းဝတွင်အနေမသင့် ၊မင်းနောင်တော်က သတ်မည်ကြံသော် ငါ့ဆီမှာခစားသည်။ငါကလည်းမင်းကို ဘုန်းစည်းစိမ်ပေးမည်ကြံသည်။မင်းကတော့ မင်းနောင်တော်ကို ငါပေးမည့်စည်းစိမ်ထက်ပိုချစ်သကိုး။…”ဟဆြိုပီး အာဏာပါးကွပ်သားတို့ကို ခေါ်ပြီး မင်းသိဒ္ဒတ်ကို ကွပ်ရန်မိန့်လေသည်။
တဲနန်းသို့သွားကာ လုပ်ကြံပါမည်။ခွင့်ပြုတော်မူပါ။…”လို့လျှောက်ပြန်တော့ သုရှင်က..”သွားချေ။”..လို့ပြန်ပြောတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျုပ်လည်း တပ်ကိုပြန်သွားပြီး ကျုပ်တပ်က အစွမ်းအစ၊သတ္တိ ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ သူရဲကောင်း ၁၂ ယောက်ကို ရွေးလို့ညချင်းပဲ ဘုရင်မင်းခေါင်
တပ်ကို တိတ်တဆိတ်ချဉ်းကပ်ပါတယ်။သေချာလှည့်လည်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက် မြောက်ဘက်ခြမ်းမှာ လူနည်းတာတွေ့တာနဲ့ တစ်ကြောင်း၊ ပုန်းကွယ်စရာဥနဲပင်ကြီးရှိနေတာနဲ့တစ်ကြောင်းအဲဒီမှာနားပြီး ဥနဲပင်ကွယ်လို့တပ်တိုင်တွေကိုနုတ်ပါတယ်။တစ်ကိုယ်စာဝင်ပေါက်ရတာ
နဲ့ သုံးယောက်ကို အဲဒီအပေါက်မှာအစောင့်ထားပြီးကျန်တဲ့လူတွေအထဲကိုဝင်တယ်။စစ်ကဲအလံထောင်ထားတဲ့ တဲမှာ နှစ်ယောကိကိုထပ်
ကျုပ်က ကျုပ်လူတစ်ယောက်ပုခုံးပေါ်နင်းပြီး ဘုရင့်တဲနန်းကြမ်းကို ဓါးနဲ့ခွဲလို့အထဲကို ၀င်ပါတယ်။ အထဲမှာတော့ ဘုရင်မင်းခေါင်ဟာ မောင်းမတော် တွေနဲ့ ခြံရံလို့စက်တော်ခေါ်နေတာကို မီးရောင်မှိန်မှိန်အောက်မှာတွေ့လိုက်ရတယ်လေ။အဲဒီအချိန်မှာ အအိပ်ဆက်တယ်လို့ထင်ရတဲ့မောင်းမတစ်ယောက်ကရုတ်တရက်ထ ပြီး…”မွန်သူခိုး၊မွန်သူခိုး…ထလော့၊ထကြလော့…လာကြလော့၊
ဒီမှာရန်သူ….”လို့အော်တာနဲ့ကျုပ်လည်းဆောင်ဓါးနဲ့ခုတ်ပြစ်လိုက်တယ်။ဘုရင်မင်းခေါင်လည်း လန့်အနိုးကျုပ်လည်းနီးရာနားက ..ဘုရင်မင်းခေါင်ရဲ့ ကွမ်းအစ် နဲ့ ပတ္တမြားကျောက်စီဓါးကို အမြန်ယူပြီး အပေါက်ကပြန်ထွက်လို့အမြန်ပြေးကြရတယ်။
တယ်။ ဆင်တင်းကုတ်က ဆင်တွေနာအောင်ထိုးရှပြီး လွတ်ပစ်ပြီး ရန်သူတွေအလွယ်တကူစုစည်းမရနိုင်အောင် လုပ်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ဝင်လာတဲ့ဥနဲပင်အောက်မှာ ၁၃ ယောက်လုံးပြန်စုမိပြီးမှ သုရှင်တပ်ဆီကိုပြန်ဝင်ကြပါတယ်။
သုရှင်ရာဇာဓိရာဇ်လည်း လဂွန်းအိန်ထံမှ သတင်းကောင်းကိုရရန်တဲနန်းတွင်းမှ စောင့်နေလေသည်။ ဒီသူရဲကောင်းသည် စတင်ကာအနီး
တွင်ခစားရကတည်းက ပုန်ကန်သူမြို့စား မဂြိုင်းခေါင်းကို တစ်ကိုယ်တည်းသွားရောတ်ဖြတ်ယူကာဆက်သခြင်းဖြင့်မိမိ ၏အလေးပေးမှု
ကိုခံခဲ့ရသည်။မိမိ နှစ်သက်သောသူရဲကောင်းဖြစ်သည်ကြောင့်လဲ စည်းစိမ်ဥစ္စာ၊ကတော်မယား ကအစမိမိက ချီးမြှင့်သည်။သို့သော်သူက မကြာမကြာ စိတ်များတတ်သည်။ရံဖန်ရ့ခါလွန်စွာတော်သော်လည်း ရံဖန်ရံခါတွင် အလွန်လက်ပေါက်ကပ်လှသည်။မိမိ၏မိဖုရားကိုပါ
တောင်းရဲသည်အထိ တော်တော်သတ္တိကောင်းသည်။မိမိက သာအခြားဘုရင်များကဲ့သို့အမျက်ဒေါသကြီးလျှင်တော့ သင်းမလွယ်။
သေတာကြာလှရှိပေမည်။ဒီလိုအတွေးတွေ နဲ့စဉ်းစားနေချိန်တွင် လဂွန်းအိန် ပြန်ရောက်လာကြောင်း အခစားဝင်ခွင့်ပြုရန်တင်
လျှောက်ကြောင်းကိုကြားရတော့ ရာဇာဓိရာဇ်လည်း စိတ်လောကြီးစွာဝင်ခွင့်ပြုလိုက်သည်။
ရှေ့တော်သို့ရောက်သော် သုရှင်ရာဇာဓိရာဇ်လည်း “ကိစ္စပြီးမြောက်ခဲ့ပြီလော”…လို့ကျုပ်ကိုမေးလေတယ်..။ကျုပ်လည်း ..”ဘုရင်မင်းခေါင်
ကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရန် ကျွန်တော်မျိုး အခွင့်ရခဲ့ပါသည်။သို့သော် မင်းဧကရာဇ်ကိုသတ်သော သူသည် အသက်မရှည်၊ဘုန်းမကြီး ဟု ရှေးလူကြီးများမိန့်သည်ကို ကြားဖူးသောကြောင့် ကျွန်တော်မျိုးမှာ သုရှင်၏ အမှုတော်ကို အရှည်သရွေ့ထမ်းလိုသည်ဖြစ်ကာ မလုပ်ကြံခဲ့။
သို့သော် သူ၏ဆောင်ဓါးနှင့် ကွမ်းအစ်ကိုမူကျွန်တော်မျိုး ရအောင်ယူခဲ့ပါသည်…။”လို့လျှောက်တော့ သုရှင်လည်း အဲဒီ ပစ္စည်းနှစ်မျိုးကို မင်းခေါင်ရဲကသမီးတော် စောပြည့်ချမ်းသာ(ရခိုင်မှရလာသူ)ကိုပြစေတော့ စောပြည့်ချမ်းသာလည်း သူ့ခမည်းတော်အဆောင်အယောင်
ပစ္စည်းများဟုတ်မှန်ကြောင်းကိုငိုယိုပြီး ပြန်ဖြေတယ်။ဒီတော့မှ သုရျင်လည်း ကျုပ်ဖက်ကိုလှည့်လာပြီး .. “ဒီတစ်ကြိမ် မင်းအသက်ကိုငါ
နောက်တစ်နေ့မနက်တါင် ရာဇာဓိရာဇ်က သမိန်ဥဒေအားသမန်အဖြစ်စေကာ ပတ္တမြားစီဓါးနှင့် ရွှေကွမ်းအစ်တို့ကိုပြန်သွားဆက်သစေ၏။
ဘုရင်မင်းခေါင်ကိုလည်းအကြောင်းစုံသိရရန်လျှောက်စေသည်။ဘုရင်မင်းခေါင်လည်း ..”မသံလုံ ဆိုသည်မှာမည်သူနည်း..။”ဟုမေးရာ သမိန်ဥဒေ လည်း .. “မသံလုံဆိုသည်မှာ လဂွန်းအိန် တည်း..။” ဟုတ်ပြန်လျှောက်၏။ဘုရင်မင်းခေါင်လည်း သမိန်ဥဒေမှ တစ်ဆင့် ရာဇာဓိရာဇ် အား စစ်အားဆက်လက်ပြုပါမည့်အကြောင်း၊ စစ်ရပ်စဲရန်အကြောင်းမရှိပါကြောင်း ရာဇသံပြန်ပါးလေ၏။
အမှန်တွင်မူ ဘုရင်မင်းခေါင်တပ်တွင် ရိက္ခာလည်းမလောက်၊စစ်သည်များလည်း စိတ်ခြောက်ခြားကာ စိတ်ဓါတ်လည်းကျနေပြီဖြစ်သည်။
တိုင်ပင်ပြီး စစ်ကိုနှုတ်၊နောက်ပြန်ဆုတ်ရန် မိန့်လေသည်။
ဘုရင်မင်းခေါင်တပ်ဆုတ်ခွာကြောင်းကို သိလျှင်ရာဇာဓိရာဇ်လည်း ဆင်တော်ဗကမတ် ကိုစီးနှင်းလျက် အမြန်လိုက်ရာနောက်မှသမိန်ဗြာဇ္ဖ လိုက်ခေါ်ကာရန်သူနောက်ချန်တပ်များ ရန်ရှိကြောင်းလျှောက်မှ သတိဝင်ကာ သူရဲသူခက်တို့ကို ရှေ့ပြေးကြည့်စေမှ သမိန်ဗြာဇ္ဖမှန်ကြောင်း
သိလေ၏။ကျေးဇူးတင်လွန်းသောကြောင့် လက်ဆယ်ချောင်းတွင်ဝတ်ဆင်ထားသည့် လက်စွတ်များကိုချွတ်ကာချီးမြှင့်လေသည်။နောက် သမိန်ဗြာဇ္ဖအကြံအတိုင်းစစ်ကိုဖြန့်တိုက်ရန် စီစဉ်လေသည်။ လဂွန်းအိန်မှာ ရှေ့ဆုံးမှချီရလေ၏။လဂွန်းအိန်တပ်ကျော်သည်နှင့်တောတွင်းရှိ
ရန်သူနောက်ချန်တပ်မှာ အင်အားသုံးရာခန့်နှင့်ထွက်တိုက်လေသည်။ထိုတပ်ကို လဂွန်းအိန်နှင့်နောက်မှလိုက်လာသော် ဥပါကောင်း
(ရာဇာဓိရာဇ်၏သားမက်)တို့က တိုက်သောကြောင့်ပျက်ရာအင်းဝမှကလေးစားတပ်နောက်ထက်ဝင်တိုက်ရာ လဂွန်းအိန် တို့နှစ်တပ်လုံး
ဆုတ်ရလေသည်။ထို့နောက် သမိန်ဗြာဇ္ဖတပ်ကို ထပ်တိုက်ရာ ပဲခူးတပ်များလိုက်မှီလာသောကြောင့် အင်းဝတပ်များပြန်ဆုတ်ကာဘုရင်
နောက်ဘုရင်မင်းခေါင်လည်း အအင်အားအနည်းငယ်မျှနှင့်ဆုတ်ခွာရာ ဟံသာဝတီဖက်မှ ဘုရင်မင်းခေါင်၏ ကိုယ်လုပ်မိဖုရားမှအစ သုံပန်းများစွာရလေသည်။မိဖုရားကြီးဖြစ်သော ရှင်မိနောက်(မင်းရဲကျော်စွာ၏မယ်တော်)လည်းပဲခူးမှရ၏။သက္ကရာဇ် ၇၇၁ တွင်ဘုရင်မင်းခေါင်မှ နောက်တစ်ကြိမ် စစ်ပြုပြန် ရာအနိုင်အရှုံးမပေါ်ပဲနှစ်ဖက်လုံးစစ်ပြန်သိမ်းရပြန်သည်။
သက္ကရာဇ် ၇၇၂ တွင် ဘုရင်မင်းခေါင်၏သားတော်မင်းရဲကျော်စွာ(မြန်မာ့သမိုင်းတွင်ထင်ရှားသူဖြစ်သည်။ဘုရင်မင်းခေါင် ရာဇာဓိရာဇ်ကို မနိုင်သမျှသူကပြန်အနိုင်ယူလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့သည်။)သည်အသက်၁၇နှစ်အရွယ်ရှိလာရာဟံသာဝတီကို အရယူရန်စစ်ချီလိုပါကြောင်းလျှောက်
ရာ ဘုရင်မင်းခေါင်လည်းခွင့်ပြုလေသည်။သို့ဖြင့် မင်းရဲကျော်စွာလည်း ကြည်းရေနှစ်တပ်ဖွဲ့ပြီး ဧရာဝတီ မြစ်ကြောင်းအတိုင်းချီလေသည်။(ထိုအချိန်ကာလကစစ်ချီလမ်းကြောင်းမှာ ရေကြောင်းအဓိကဖြစ်ပြီး၊ယခုကဲ့သို့ကုန်းလမ်းမျိုးမဟုတ်ပါ။
ဧရာဝတီမြစ်ကိုအားပြုရသည်။ထို့ကြောင့် မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိ မြို့ရွာများမှာ အမြဲပင်စစ်ဒဏ်ကိုခံရသည်။အထူးသဖြင့် ကူထွက်
(မြန်အောင်)၊မကွေး၊စလေ၊ပုဂံ၊ပြည်၊ဒဂုံ(ရန်ကုန်)၊သံလျှင် ထိုမှပဲခူးဖြစ်သည်။ အရှေ့ဖက်ကျသောတောင်ငူမှာစစ်ဒဏ်ကို ကြီးမားစွာခံရ
ချီတက်လုပ်ကြံလေသည်။ တစ်မြို့ကိုမှ မအောင်မြင်၊မသိမ်းပိုက်နိုင်သော်လည်း ရာဇာဓိရာဇ်အား အကြီးအကျယ်ချောက်ခြားစေလေ၏။
နောက်မှုးမတ်များနှင့်တိုင်ပင်ကာ ရခိုင်ကို အရင်ရအောင်သိမ်းပိုက်မည်ဟုဆိုကာ ရခိုင်သို့ချီလေသည်။ ရခိုင်ဘုရင် နရမိတ်လှ (ရာဇာဓိရာဇ်မှ နန်းတင်ပေးခဲ့သူ)မှ အခုခံနိုင်သောကြောင့် ရခိုင်ကို အလွယ်တကူရသည်။ မြောက်ဦးတွင် လကျာ်ကြီး၊သံတွဲတွင် စုက္ကတေး တို့ကို အစောင့်ထားပြီး ဆင်မြင်း၊သုံပန်းများစွာကို ယူကာအင်းဝသို့ပြန်လေသည်။ဘုရင်မင်းခေါင်လည်းသားတော်ကို အားရ၀မ်းသာချီးမွမ်းတော်မူ၏။
နောက်ရခိုင်ကို အင်းဝမှ သိမ်းယူသည့်အောကာင်း ရာဇာဓိရာဇ် သိလျှင် စစ်တပ်ကြီး စီရင်ကာ ချီတက်တိုက်ခိုက်စေသည်။မွန်တို့သံတွဲကို ရပြန်ရာ တပ်ချလျက်နေသည်။ထိုသတင်းကို ဘုရင်မင်းခေါင်ကြားလျှင် မင်းရဲကျော်စွာအား ရခိုင်သို့ ချီစေသည်။ အင်းဝတပ်များရခိုင်ရောက်သော် မွန်တို့ကို ၀န်းရံပြီး နေရာ မြို့တွင်းရှိမွန်၊ရခိုင်တို့လည်းငတ်မွတ်လေသည်။ နောက်မွန်တပ်မှုးတို့လည်း ပရိယာယ် သုံးကာ ရာဇာဓိရာဇ်ကိုယ်တိုင်ချီတက်လာတော့မည့်ဟတ်ဖြင့် သတင်းလွင့်ရာ အင်းဝတပ်လည်း စစ်နှစ်ဆက်ညှပ်မည်စိုးသောကြောင့် ဆုတ်လေသည်။
ထိုသို့ မင်းရဲကျော်စွာ ဆုတ်ခွာသွားပြီးနောက် မွန် နှင့်ရခိုင်သားတို့လည်း မြောက်ဦးကို သိမ်းကာ နရမိတ်လှ အားထပ်တစ်ခါနန်းတင်၍ပြန်လေ၏။ မင်းရဲကျော်စါာလည်း အင်းဝပြန်ရောက်ပြီးနောက် များမကြာမှီပင် သိန္နီစော်ဘွား သည် အင်အားများစွာနှင့် အင်းဝ သို့စစ်ချီလာကြောင်းကို သိလျှင် ကိုယ်တိုင်ဗိုလ်မှုးချုပ် အဖြစ်ဦးဆောင်ကာတိုက်လေသည်။ သိန္နီစော်ဘွားလည်း ဆင်ထက်တွင်ပင် မင်းရဲကျော်စွာလက်ချက်ဖြင့် သေပြီး သိန္နီတပ်လည်း ပျက်ကာပြေးရာ ဆင်မြင်း သုံပန်းများစွာကို မင်းရဲကျော်စွရလေသည်။ ထို့နောက် မင်းရဲကျော်စွာလည်း အင်အားစုစည်းပြီး သိန္နီသို့ချီတက်ကာ သိန္နီကို တိုက်လေတော့သည်။သိန္နီက တရုတ်ထံ မှ စစ်ကူတောင်းသောကြောင့်တရုတ်စစ်ချီလာသည်ကို တောတွင်းမှ တပ်ချကာအလစ်တွင် တိုက်ကာ အောင်လေသည်။ နောက် သိန္နီကို ၀ိုင်းရံမြဲဝိုင်းနေလေ၏။
ရာဇာဓိရာဇ် လည်း မင်းရဲကျော်စွာ သိန္နီသို့ချီ သည့်သတင်းကိုကြားလျှင် ပြည်မြို့ကို တိုက်လေ၏။ပြည်စား လကျာင်္ပျံချီ အခုအခံကောင်းလှသောကြောင့် မရနိုင်ဘဲ တစ်လကျော်မျှ ၀ိုင်းထားရပြန်သည်။ ထိုစဉ် မုတ္တမ ကို ယိုးဒယား တို့က ကျူးကျော်ကြောင်းကို သိ၍ သားတော် ဗညားပုသိမ် ကိုတပ်မှုးချုပ်ခန့်ကာ စစ်သည် ငါးသောင်း နှင့် ပြည်ကို ဆက် ၀ိုင်းရံစေခဲ့ပြီး ဟံသာဝတီသို့ပြန်ကာ အင်အားစု၍ မုတ္တမသို့ဆက်လက်ချီတက်လေသည်။
နောက်တစ်လကျော်ထပ်ကြာသော် ပြည်မြို့လည်းငတ်မွတ်သည်ရှိ၍ ဘုရင်မင်းခေါင်လည်း သားတော် ကိုမစောင့်နိုင်တော့ဘဲ ကိုယ်တော်တိုင် စစ်အင်အား ခုနှစ်သောင်းနှင့် ပြည်သို့စုန်လေသည်။ ထိုသတင်းကို ကြားသော မင်းရဲကျော်စွာလည်း အင်းဝသို့အမြန်ပြန်လာကာ လှေတပ်ကြီးအမြန်ဖွဲ့ပြီး အင်အားတစ်သိန်းကျော်နှင့်ခမည်းတော် ဘုရင်မင်းခေါင်နောက်သို့လိုက်
လေ၏။ပြည်တွင် ရှိသောမွန်တပ်များလည်း ဘုရင်မင်းခေါင် သည် မင်းဧကရာဇ်တပ်ဖြစ်သည်။ငါတို့ဒီနေရာမှ မခံသင့်ဟုတိုင်ပင်ပြီး တစ်ဖက်ကမ်းရှိ တလည်ဆီးသို့တပ်ပြောင်းရွေ့သည်။
မင်းရဲကျော်စွာလည်း ပြည်သို့ရောက်လျှင် မွန်တပ်ရှိရာသို၊့သွားကာ အကဲခပ်လေ၏။ ကျုံးသိမ်ပြီးလှေတပ်နည်းသည့်ဖက်ကို တွေ့လျှင် မိမိလှေတပ်ကြည်းတပ်များနှင့် တိုက်ရာမွန်တပ်လည်း တပ်တိုင်များပြို၏။ သုရှင်၏သားမက်တော် သမိန်ဥပါကောင်း လည်းဆင်နှင့်ထွက်ကာ အင်းဝတပ်ကို တိုက်လေသည်တွင် မွန်တို့က ပြိုလေသောတပ်တိုင်များကို အလျင်အမြန်ပင် ပြန်ထူကာပြင်ဆင်လေ၏။ သမိန်ဥပါကောင်းလည်း နာမည်ကြီးလေ၏။ထိုကြောင့် မင်းရဲကျော်စွာလည်း ဗညားပုသိမ် ထံစာပို့ပြီး ဥပါကောင်း အားတွေ့လိုကြောင်း တောင်းဆိုသည်။ သမိန်ဥပါကောင်း လည်း လက်ဆောင်ပုဏ္လာ များနှင့် မင်းရဲကျော်စွာရှေ့သို့အခစားဝင်လေသည်။ မင်းရဲကျော်စွာလည်း ချီးမွမ်းပြီး အကယ်၍မိမိတွင်ခစားပါက ပြည်စားလကျာင်္ပျံချီနင့်တန်းတူ မြှောက်စားမည်ဟုပြောရာ ဥပါကောင်းလည်း ငြင်းဆန်ပြီးပြန်လေသည်။နောက် အင်းဝတပ် ၀ိုင်းရံလေသောကြောင့် ဗညားကပုသိမ်တပ်လည်း ငတ်မွတ်လေသည်။ထို့ကြောင့် မုတ္တမတွင် ယိုးဒယားတို့ကို နှိပ်နှင်းပြီး ဟံသာဝတီသို့ပြန်ရောက်လာသော ခမည်းတော် ရာဇာဓိရာဇ်ထံသို့လူလွတ်၍ စစ်ကူချီရန်တောင်းဆိုလေသည်။ ရာဇာဓိရာဇ်လည်း အင်အားများစွာနှင့် ချီတက်ရန်စီစဉ်လေသည်။
သုရှင်ချီတက်ရန်မြို့စား၊ရွာစားများအားဆင့်ခေါ်ရာ သုံးရက်ကြာမှ အဝေးအနီးမှ မှုးမတ်များစုံလင်စွာရောက်ရှိလေသည်။ မြောင်းမြမှ သမိန်ဗြာဇ္ဖလည်း ကျန်းမာခြင်းမရှိ ။ထိုသတင်းကိုကြားသော သုရှင်လည်း အမတ်ကြီးထံသို့ကိူယ်တိုက်ကြွ၍ အားပေးလေးသည်။
အမတ်ကြီးသည်သုရှင်လာသည်ကို တွေ့လျှင် ဦးခိုက်ပြီးမ ရှိခိုးနိုင် ။အိပ်ရာထက်၌သာ လက်အုပ်ချီနိုင်တော့သည်။ `အရှင်မင်းကြီး ၊ ကျွန်တေ်ာမျိုးမှာ သစ္စာမြဲမြံစွာနှင့်အမှုတော်များစွာထမ်းခဲ့ပြီးလေပြီ။ ဒီတစ်ကြိမ်တွင်တော့ အမှုတော်ကို ထမ်းနိုင်တော့ဖွယ်မမြင်တော့ဘဲသုရှင်နှင့်ခွဲခွာရပေတော့မည်။အပြစ်ကြီးငယ်ရှိလျှင်ခွင့်လွတ်တော်မူုပါ´ဟုလျှောက်တင်လေ
သည်။သုရှင်လည်း`ကောင်းပြီ။အားလုံးကိုငါခွင့်လွတ်သည်။´ဟုမိန့်ကာ စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာနှင့် မိမိတဲနန်းသို့ပြန်လေ၏။
ကျုပ်လည်း စိတ်မကောင်းကြီးစွာနဲ့အမတ်ကြီးဆီကို ၀င်တွေ့တော့ အမတ်ကြီးက ကျုပ်ကိုအနားခေါ်ပြီး မိန့်မှာတယ်..` လဂွန်းအိန်.. မင်းတို့ကို ဒီတစ်ကြိမ် ငါတစ်ကယ်ပစ်သွားရတော့မည်။ယခုတစ်ခေါက်ချီရသောစစ်ကိုလည်း ငါစိုးရိမ်လှသည်။ငါမရှိလျှင် မင်းနှင့် အမတ်ဒိန်၊သမိန်အ၀နံနိုင်တို့သာကျန်တော့မည်။ယခုနှစ်သည် သုရှင်၏ ဇာတာတော် မသန့်ဟု ပုဏ္ဏားတော်တို့က ဆိုသည်။သုရှင်လည်းသားတော်ဗညားပုသိမ် ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်သာချီရသည်။ မင်းယခင်လို မစွန့်စားလွန်းနှင့်။မင်းရဲကျော်စွာမှာမင်းပျိုမင်းလွင်ဖြစ်သည်။စိတ်ဓါတ်မာကျောကြံခိုင်သည်။ စစ်အင်အားလည်းကြီးလှသည်။
အကယ်၍ သုရှင် သည် သားတော်ဗညားပုသိမ်ကို ပြန်ကယ်တင်၍ရလျှင် တပ်ပြန်ဆုတ်မည်။ထိုအခါ မင်းရဲကျော်စွာ မလိုက်ပဲမနေ။မင်းတို့အစွမ်းရှိရန်သာအရေးကြီးလှသည်။စစ်ကိုမှန်ကန်စွာဆုတ်နိုင်ပါမှ လွယ်မည်။မမှန်လျှင် ရှင်ဘုရင့်အရေးပျက်ချေမည်။မင်းတို့ သူရဲကောင်းတွေ မှားလျှင် သုရှင် အသရေ ညိုးနွမ်းလေတော့မည်။´လို့မှာတမ်းရှည်ကြီး ချွေပါတယ်။ဒီစကားတွေဟာ သူ့ရဲ့နောက်ဆုံး နှုတ်ဆက်စကားဆိုတာ ကျုပ်ရင်ထဲမှာသိနေတယ်ဗျာ။ တစ်ကယ်ပဲနောက် သုံးရက် အကြာမှာ ကျုပ်တို့မကြားခြင်ဆုံးသတင်းကို ကြားရတော့တာပါပဲ။ အမတ်ကြီးကို စစ်အခမ်းအနားနဲ့ ထီးဖြူမိုးလို့မီးသဂြိုလ် ပြီး အရိုးတွေကို ရွှေမော်ဓော ဘုရားခြေရင်းမှာဂူသွင်း မြုပ်စေတယ်လေ။
နောက်တစ်နေ့မနက်မှာ ကျုပ်တို့တပ်တွေ ပြည်ကို ချီတက်တိုက်ခိုက်ပြီး စစ်ကို စတင်ပါတော့တယ်။တလည်ဆီးရှိ ဗညားပုသိမ်
ရဲ့ တပ်တွေလည်း နောက်ကိုဆုတ်ပြီး ကာမဆိပ် မှာတပ်စွဲထားတယ်။မင်းရဲကျော်စွာလည်း တလည်ဆီးမှာ ၀င်နေပြီးတပ်စွဲတယ်။ကြားတာတော့ မင်းရဲကျော်စွာဟာ အမတ်ကြီး သမိန်ဗြာဇ္ဇ လွန်တာကိုကြားတော့ အလွန်အမင်းဝမ်းမြောက်တယ်တဲ့လေ။ နောက်များမကြာမှီ…..
ရာဇာဓိရာဇ် ၏မျက်နှာတော်မှာ လွန်စွာမှ ဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲခြင်းဖြင့် မျက်မှောင်ကြုံ့လျက်နေသည်။လက်ထဲတွင် ရာဇသံစာ တစ်စောင်ကို ကိုင်ထားလျက် သလွန်ပေါ်တွင် နေမထ်ိထိုင်မသာပင်ရှိလျက်..`မင်းရဲကျော်စါာက သူရဲကောင်းတစ်ဦးချင်း လှေစီးချင်းထိုးရန် စာစေပြီး အရေးဆိုလာသည်..။စစ်အတွင်းတွင် ငါ့သူရဲတစ်ယောက်ကို ငါမလွတ်လို..´ဟုနှုတ်ကလည်းမိန့်လေသည်။ ဤသည်ကိုကြားသော လဂွန်းအိန် သည် ရှေ့တော်သို့ထွက်ကာ ဦး သုံးကြိမ်ချပြီး.. ` ကျွန်ုပ် ယောကျာင်္းဖြစ်သည်မှ ဆင်စီးချင်း၊မြင်းစီးချင်း၊ လှေစီးချင်း၊တစ်ဦးချင်းစစ်ထိုးရန် ဤမြေပေါ်တွင် မည်သူကိုမျှမကြောက်။သူရဲတစ်ဦးချင်းမှန်ပါက ကျွန်ုပ် ထွက်တိုက်မည့်အကြောင်းကို ရွှေနန်းရှင်သားတော်ထံသို့ ပြန်ကြားတော်မူပါ..´
ရာဇာဓိရာဇ်လည်းတမန်တော်ကို စာပြန်ကြားစေပြီး နောက်တစ်နေ့မိုးသောက်လျှင် တိုက်စေမည့်အကြောင်း အချိန်းအချက်ပြုစေသည်။ထိုသတင်းကိုရသောမင်းရဲကျော်စွာသည် ၀မ်းသာစွာဖြင့် ..` ဟံသာဝတီပြည့်ရှင်တွင် သမိန်ဗြာဇ္ဇ နှင့် လဂွန်းအိန်တို့သာ သုရှင် ၏လက်ဝဲ၊လက်ယာ ရံဖြစ်သည်။ယခု သမိန်ဇြာဇ္ဇမှာလွန်ပြီးလေပြီ။လဂွန်းအိန်သာကျန်တော့သည်။ လဂွန်းအိန်ကိုသာ ငါရလိုက်လျှင် ငါတို့လက်ချက်ကို မွန်တို့ခံနိုင်ရန်မရှိတော့။ လဂွန်းအိန် သည်လှေတစ်စီးချင်းသာ တိုက်နိုင်မည်။ လှေလေးစီးလာလျှင် ခံနိုင်မည်လော။…´ဟုပြောကာ တိုက်လှေလေးစီး ကို စီစဉ်သည်။ အံ့စရာလှေ တွင် စုက္ကတေး ၊မြေးများဖွားလှေတွင် မင်းစည်သူ၊သားများမိလှေတွင် ဥဇနာ ၊ရှမ်းမွန်လှေတွင် စတုရင်င်္ဂသူ တို့အားအသီးသီးစီးစေပြီး သူရဲသူခက်အပြည့်တင်စေသည်။ နောက် အံ့စရာလှေကို သာထီးဖြူမိုးလျက် ထွက်စေသည်။ ကျန်လှေသုံးစီးကိုမူ လျို့ဝှက်ကာပြုလုပ်ထားသည့် မြောင်းအတွင်းတွင် ပုန်းနေစေသည်။
အခန်း(၁၂) – လဂွန်းအိန်၏ဇာတ်သိမ်းခန်း
ကျုပ်လည်း သုရှင်ပေးသနားတဲ့ သေနာပတိ တို့ရဲ့ အဆောင်အယောင် အ၀တ်အစားများကို ၀တ်ဆင်တယ်။ ပြီးတော့ရွှေရင်စည်း၊ရွှေစလွယ်၊ရွှေလက်ကျပ်၊ရာမနားတောင်း၊ကျောက်စီလက်စွတ် တွေကို လက်ဆယ်ချောင်းအပြည့် ၀တ်ဆင်ပြီး သုရှင် ရာဇာဓိရာဇ် ထံကို အခစားဝင်လို့ဦးခိုက်ရှိခိုးတယ်။ဒီတစ်ကြိမ်အခစားဝင်တာဟာ ကျုပ်အနေနဲ့ သုရှင်ကို နောက်ဆုံးအကြိမ် အသက်ရှင်လျက် အခစားဝင်ရတယ်ဆိုတာ မသိခဲ့ပါဘူး။နောက် သုရှင်က စီချင်းတိုက်ရင်စီးဖို့ရာ မိကျောင်းလှေ ကို ပေးပြီး ကျုပ်ရဲ့ သူရဲသူခက် သုံးရာကို လှေပေါ်တင်လို့ စီးချင်းထိုးဖို့တပ်က နေထွက်လာကြတယ်။
အင်းဝဖက် ကလှေကတော့အံစရာ တဲ့။ဦးဆောင်တဲ့သူကတော့ စုက္ကတေး။လှေက ကျုပ်လှေထက် နှစ်ဆနီးပါးလောက်မြင့်တယ်ဗျ။ကျုပ်ဖက်က ထိုးခုတ်တိုက်ခိုက်ဖို့ခက်တာတော့အမှန်ဘဲ။ဒါပေမယ့် ကျုပ်လည်း ဥာဏ်ကိုသုံးပြီး သံကြိုး ၊သံကွင်း တွေကို ရန်သူလှေပေါ်ကို ပစ်တင်စေပြီးလှေချင်းပူးကပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲ …. ရုတ်တရက်ဆို ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ အင်းဝဖက်က လှေတစ်စီး ဗြုံန်းစားထွက်လာပြီး ကျုပ်လှေနားကပ်ပြီး နှစ်စီးတစ်စီးညှပ်ပြီး အတင်းတိုက်ပါတော့တယ်။ကျုပ်နဲ့ကျုပ်ရဲ့ စစ်သူရဲတွေလည်း အားမလျော့ပဲ အတင်းထိုးခုတ်တိုက်ခိုက်တော့ အချိန်ကြာတော့ ရန်သူဖက်က လှေနှစ်စီးမှာ အကျအဆုံးများလာတော့တယ်။နောက်ထွက်လာတဲ့လှေပေါ်က ဦးစီး မင်းစည်သူပဲ။ဒီလိုနဲ့နှစ်စီးတစ်စီး တိုက်ခိုက်တဲ့ကြားက ကျုပ်ဖက်ကအရေးသာနေချိန်မှာပဲ အင်းဝဖက်က နောက်ထပ်လှေနှစ်စီး ထပ် ထွက်လာပြီးကျုပ်လှေကို ၀ိုင်းတိုက်ကြပါတော့တယ်။ကျုပ်စစ်သည်တွေဟာ ရန်သူလှေလေးစီးကို တစ်စီးတည်းနဲ့ပြန်တိုက်ရတဲ့အတွက် အကျအဆုံးတွေရှိလာတယ်ဗျာ။ အရေမတွက်အားပေမယ့် သူတို့ရပ်တည်ရတဲ့ နေရာတွေကို ကြည့်ခြင်းဖြင့်ကျုပ်စစ်သည် တစ်ရာနီးပါးတော့ ကျဆုံးသွားကြပြီး နှစ်ရာလောက်ပဲ ကျန်တယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်။ ကျုပ်လည်း ကိုယ်တိုင် တိုက်သလို တစ်ဖက်ကလည်းကျုပ်သူရဲတွေကို အမိန့်ပေးရင်း ပင်ပန်းကြီးစွာနဲ့တိုက်ရတာပေါ့။နောက်တိုးလာတဲ့အင်းဝလှေနှစ်စီးက ဥဇနာ နဲ့ စတုရင်င်္ဂသူတို့လှေတွေပါ။ နောက်ဆုံးတော့ကျုပ်ဖက်က အရည်အချင်းမှာသာပေမယ့်၊လှေ အရေအတွက်နဲ့ စစ်သူရဲအရေအတွက်မှာတော့ အင်းဝဖက်က သာလွန်းမကသာနေတာကြောင့် ကျုပ်လှေပေါ်ကို ရန်သူဖက်က အရတက်လာကြပြီး ကျုပ်တို့နဲ့ လက်တစ်ကမ်းတိုက်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်ကြရပါတော့တယ်။ကျုပ်စိတ်ထဲမှာ ကျုပ်ရှုံးပြီဆိုတာနားလည်ပေမယ့် သုရှင်ကိုပေးထားတဲ့ ဂတိတစ်ခုအတွက်နဲ့ အသက်စွန့်ပြီး တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်၊သေမှ အရှုံးပေးမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်ဗျာ။ ဒီလိုအချိန်လေးအျွှင်းမှာပဲ ရန်သူဖက်က ပစ်လိုက်တဲ့ လှံတံဟာ ကျုပ် ပေါင်ကိုလာမှန်ပါတော့တယ်။မှန်ယုံမျှမကလို့ထုပ်ချင်းပါပေါက်သွားပါတယ်လေ။ ကျုပ်လည်း ဒဏ်ရာကို အ၀တ်နဲ့စည်းပြီး ဆက်တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့် ရန်သူတွေက လှေပေါ် ကှုပ်စစ်သည်တွေကို အနိုင်ယူပြီး ကျုပ်ကို ၀င်နပန်းလုံးပြီးဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာ ကြားလိုက်ရတဲ့ ကမ်းပေါ်ကအော်သံကတော့ ..”လဂွန်းအိန်ကို မသေစေနှင့်..”တဲ့။လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ကမ်းပေါ်ကနေ ရှုစားနေတဲ့ ရွှေနန်းရှင်ရဲ့သားတော် မင်းရဲကျော်စွာ။နောက်ကျုပ်ကမ်းပေါ်ကို ရောက်အောင်ဝိုင်းထမ်းပြီးခေါ်သွားလို့ မင်းရဲကျော်စွာနဲ့ တွေ့တော့ သူကကျုပ်ဒဏ်ရာကို မြင်တော့ ..”မရှင်နိုင်တော့ပြီ..”တဲ့။ကျုပ်လည်း မရှင်ချင်တော့ပါဘူးလေ။ ကျုပ်က စစ်ပွဲမှာ အရှုံးနဲ့ပြန်ပြီး သုရှင်ဆီ အခစားမ၀င်ချင်တာကိုး။ နောက် ဘုရင်မင်းခေါင် ကိုယ်တော်တိုင် ကြွလာပြီး ကျုပ်ကို ကြည့်ရှုပါတယ်။ နောက် မင်းရဲကျော်စွာကို ..”ငါတို့ မင်းဧကရာဇ်အချင်းချင်း စစ်ပြုခင်းကျင်းသည်တွင် သူရဲကောင်းတို့ကို မသတ်၊ခု လဂွန်းအိန် ကိုသေလောက်အောင် ထိုးခုတ်သည်မှာ မသင့်။ ပန်းကျော်တွင်ငါတပ်ချစဉ်က လဂွန်းအိန် ကျေးဇူးရှိခဲ့ဖူးပေသည်။သူ့ကိုမသေအောင် ကုရမည်။..”ဟုပစ်တင်လေတယ်။(ပန်းကျော်တွင်မင်းခေါင်အား လဂွန်းအိန် တဲနန်းအတွင်းထိဝင်ရောက်ကာသတ်ခွင့်ရသော်လည်းမသတ်ပဲ ကွမ်းအစ်နှင့် ကျော်စီဓါးကိုသာယူကာပြန်သည်ကို ဆိုလိုသည်။)နောက် ဘုရင့်သမားတော် တန္တ၀ါရီ ကိုခေါ်ကာကျုပ် ကိုကုစေတယ်။
နောက်ကျုပ်ကို မင်းရဲကျော်စွာက ..” မင်းမစိုးရိမ်နှင့် မင်းအသက်ရှင်အောင်ကုပြီး မင်းကိုငါသူကောင်းပြုမည်။..”လို့လည်းအားပေးပြန်တယ်။ကျုပ်လည်း .. “ကျွန်ုပ် လူမဖြစ်နိုင်တော့ ပြီ။အနာမှာသည်းလှသည်။..”လို့ပြန်လျှောက်တော့မင်းရဲကျော်စွာ မျက်နှာညိုးပြီး ..”ထမင်းစားမည်လော။..”လို့မေးပြန်တယ်။ကျုပ်လည်း ..””အရှင်တစ်ပါး၏ ထမင်းသာ ကျွန်ုပ်ဝမ်းသို့င်စေမည်။ အရှင်နှစ်ပါး၏ထမင်းကို ကျွန်ုပ် ၀မ်းသို့မသွင်း။..”ဆိုပြီးငြင်းပယ်တော့ မင်းရဲကျော်စွာကကျေနပ်စွာနဲ့ ခေါင်းငြိမ့်ပြီး ..”သို့ဆိုလျှင် ရေသောက်မည်လော။..”လို့မေးပြန်တယ်။ …ကျုပ်က ..” ရေနှင့်ကွမ်းကိုသာပေးတော်မူပါ..”လို့ပြောတော့ ရေတကောင်းနဲ့ရေကို ခပ်ပေးပြီး ၊ သူ့ ကွမ်းအစ်မှကွမ်းကိုကိုယ်တော်တိုင်ပဲ ယူလို့ကျွေးပါတယ်။
အဲဒီလို ကျုပ် ကိုကျုပ်မရှင်နိုင်တော့တာ သေချာသိရတဲ့အချိန်မှာ ကျုပ် သုရှင်ကို တွေ့ချင်စိတ်က အရမ်းကို ပြင်းပြလှပါတယ်။ ကျုပ်ကို ဘ၀လှအောင် မစတဲ့ အရှင်သခင်၊ကျော်ကြားခြင်းဆိုတဲ့ ဂုဏ်ကို ပေးတဲ့ အရှင်သခင်တစ်ပါးပဲမဟုတ်လား။ကျုပ်အတွက်ကတော်မယား၊မြို့စားစည်းစိမ်၊နေဖို့ရာ နန်းဆောင် တိုို့ လိုလေသေးမရှိအောင် ဖြည့်စည်းပေးတဲ့ မင်းဧကရာဇ်တစ်ပါးငကို ကျုပ်နောက်ဆုံး ဖူးတွေ့ပြီးကျုပ်အမှားတွေပြုခဲ့မိရင်ခွင့်လွတ်ဖို့ တောင်းပန်ရှိခိုးချင်ပါသေးတယ်ဗျာ။ဒါပေမယ့်ခုတော့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ကျုပ်ဒီညကိုကျော်ပြီး ရှင်နိုင်စရာမရှိတော့တာသေချာပါတယ်။ သမားတော်ကိုယ်တိုင် မရတော့ဘူးဆိုပြီး ကျုပ်ကိုပြောပြီးပြီမဟုတ်လား။
ဒီအချိန်မှာကျုပ်အတွေးတစ်ခုဝင်လာတယ်။မင်းရဲကျော်စွာဟာ ကျုပ်ကို အကောက်ကြံပြီး အရယူခဲ့တာကို ကျုပ်နှုတ်အားဖြင့်တော့ပြန်အနိုင်ယူရမယ်။ ဒါမှမဟုတ် သုရှင်ကိုကြောက်ရွံစေဖို့ရာ စကားနဲ့ ခြိမ်းခြောက် ခဲ့ရမယ်။ ဒီလိုတွေးပြီး..” ရွှေနန်းရှင်၏သားတော်ပေးသောရေနှင့် ကွမ်းကို စားရသည်။ ကျေးဇူးတော်ကို တစ်ပွဲတစ်လမ်းမှ မဆပ်ရ။ဆပ်နိုင်တော့မည်လည်းမဟုတ်။သို့သော် နောင်ရေးကို အကျိုးရှိစေရန်း ရွှေနန်းရှင်၏သားတော်ကို ကျွန်ုပ်လျှောက်တင်မှာကြားပါရစေ။အရှင့်သားတော်မနာယူလိုသော် ကျန်အမှုးအမတ်တို့နာယူကြကုန်။ နောင်ကို သုရှင်ရာဇာဓိရာဇ်နှင့် စစ်ထိုးခဲ့လျှင် ဆင်ချင်း၊မြင်းချင်း၊လှေချင်း၊ လူချင်း တစ်ဦး ချင်းတွေ့ရန်မကြိုးစားလေနှင့်။ သုရှင်သည် ထိုကဲ့သို့ တစ်ဦးချင်းစီးချင်းထိုးရာတွင်နည်းနည်းကောင်းသည်မဟုတ်။ထို့ပြင်လက်ဝဲ၊လက်ယာ တွင်ရံကြသောဆင်စီးသူရဲများမှာ သူစိမ်းများမရှိကြ။အားလုံးဆွေမျိုးသားချင်းများသာ။ ရန်သူကိုပမာမခန့်၊ကြောက်ခြင်းအလျင်းမရှိကြ။ လူနှင့်မတူပဲဘီလူးသူရဲဟုဆိုလျှင်လည်း ယုံကြမည်သာ။အကယ်လို့ကျွန်ုပ် မှာကြားသည်ကို မယုံသော် နောင်ကြုံတွေ့မှ သိကြလေမည်။..လို့လျှောက်တော့ .. မင်းရဲကျော်စွာက ရယ်မောပြီး…”လဂွန်းအိန်သည် သေခါနီးတွင်ပင် သု့သခင်အတွက် အရေးဆိုကာငါတို့အား ကြောက်ရွံစေရန် ပြောနိုင်သေးသည်။ သေလျက်ပင်အဆိပ်မပြယ်သေး။မြွေကဲ့သို့ပင်..”လို့ပြောတယ်။..’ဒီလိုနဲ့ သန်းကောင်နားနီးတော့ ကျုပ် ၇ဲ့ခြေလက်တွေ အေးစက်လာပြီး မျက်မြင်အာရုံတွေတစ်ဖြည်းဖြည်း မှုန်ဝါးပြီး..ကျုပ်..ကျုပ်…ဟာ..သုရှင်ရာဇာဓိရာဇ်၊ မေနှင်းကေသရာ..။အမတ်ကြီး သမိန်ဗြာဇ္ဖ…. ကျုပ်မိဘ နှစ်ပါး..။ နောက် …. ဘာမှကိုမသိနိုင်တော့ဘဲ အမှောင်တကာ့အမှောင်ဆုံးတွင်းနက်ကြီးထဲကို ကျုပ်ကျသါားတယ်လို့ပဲခံစားလိုက်ရတယ်လေ..။
ထိုကဲ့သို့ မွန်သူရဲကောင်း လဂွန်းအိန် သည် မင်းရဲကျော်စွာ၏အကောက်ကြံကာ စီးချင်းထိုးစေသည့်အတွက် ကျဆုံးခဲ့ရပြီး နောက်တစ်နေ့နံနက်တွင် ငှက်ပျောဖောင်ထက်တင်ကာ အ၀တ်ဖြူဖြင့်အုပ်လျက် ဟံသာဝတီတပ်ရှိရာ မြစ်အောက်ဖက်သို့မျှောလေသည်။ ရာဇာဓိရာဇ်လည်း လဂွန်းအိန် အလောင်းကောင်ကို ကိုယ်တိုင်ကြည့်ကာ စိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်၏။ နောက်သူရဲကောင်းတို့ကို သဂြိုလ်သည့် အစဉ်အလာအတိုင်း မီးသဂြိုလ်ကာ အရိုးကို ရွှေမော်ဓော ဘုရားခြေရင်းတွင် မြုပ်နှံစေသည်။
မကြာမှီ ရာဇာဓိရာဇ် လည်း သားတော် ဗညားပုသိမ်တပ်နှင့်ပြန်ပေါင်းမိကာ တပ်ကို ညအချိန်တွင် ရေကြောင်းမှ ဆုတ်လေသည်။ကြည်းကြောင်းမှဆုတ်သော တပ်များအနက် သမိန်ဗရမ်းကို နောက်မှလိုက်လာသောအင်းဝတပ်က မိကာ ငှင်းစီးသော ဆင်ဖြူတော်ဗကမတ်ကိုပါမိ၏(သမိန်ဗရမ်းမှာ ရာဇာဓိရာဇ်၏ သားမက်တော်သူဖြစ်သည်။နောင်အင်းဝသို့ပါသွားပြီး အကျဉ်းကျနေချိန်တွင်တရုတ်တို့က အင်းဝကိုလာရောက်ပြီး သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ချင်း စီးချင်းထိုးရန်စိန်ခေါ်လာသောအခါ အင်းဝဖက်မှ သူရဲကောင်းအဖြစ် ခံယူပြီး တရုတ်သူရဲကောင်း ဂါမဏိကို အနိုင်ယူခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။)
ထို့နောက် ရာဇာဓိရာဇ်လည်း ဇာတာမသန့်ဟု ဟူးရား၊ပုဏားတို့က ဟောကြားသောကြောင့် သားတော်ကြီး ဗညာကျန်းကို ထီးနန်းယာယီလွဲအပ်ကာ မုတ္တမသို့ သွားရောက် နေထိုင်သည်။မင်းရဲကျော်စွာလည်းထိုသတင်းကိုကြားရာ ဟံသာဝတီထိချီတက်ကာ မြိုကို ၀ိုင်းရံထားသည်။ နောက်ရာဇာဓိရာဇ်လည်းဇာတာသန့်ချိန်ရောက်သော်ကိုယ်တော်တိုင်ချီတက်လာပြီး မင်းရဲကျော်စွာနှင့်ဆင်စီးထိုးရာ မင်းရဲကျော်စွာ ကျဆုံးလေသည်။
စာအားဖြင့် အင်းဝ-ဟံသာဝတီ အနှစ်လေးဆယ်စစ်ဟု ခေါ်သော်လည်း အမှန်တွင် နှစ်၅၀ ကျော်ကြာတိုက်ခဲ့ရသည်။ ထိုကဲ့သို့စစ်ကာလကြာရှည်လွန်းသဖြင့် နှစ်ဖက်လုံးတွင် စီးပွးရေး၊လူမှုရေး၊ အတွေးအခေါ် နှင့် စာပေပညာများပါမကျန် နေရာပေါင်းစုံ၊ဘက်ပေါင်းစုံမှ ကျဆင်းခဲ့ရပြီး စစ်လမ်းကြောင်းမှ ဝေးကွာသော(သို့မဟုတ်) စစ်ဒဏ်ကို အနည်းအကျဉ်းသာခံစားရသောတောင်ငူသည် အေးချမ်းသာယာပြီးမင်းကြီးညို(တပင်ရွှေထီး၏ဖခမည်းတော်)လက်ထက်တွင် အင်အားကြီးမားလာကာ အင်းဝတွင် နရပတိမင်း ၊ ဟံသာဝတီတွင် သုရှင်တကာရွတ်ပိ မင်း တို့လက်ထက်တွင် မင်းတရားရွှေထီး(တစ်ပင်ရွှေထီး)မှဟံသာဝတီကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး၊ဟံသာဝတီဆင်ဖြူများရှင်(ဘုရင့်နောင်)လက်ထက်တွင်အင်းဝကို
ကြီးရှင်စောပု)၊ဓမ္မစေတီ(ရှင်စောပု၏ သားမက်)၊ဗညားရံ(ဓမ္မစေတီ၏ သား)၊ထိုနောက် သုရှင်တကာရွတ်ပိလက်ထက်
တွင်အင်အားယုတ်လျော့ကာ တောင်ငူဘုရင် တပင်ရွှေထီး ကအနိုင်ယူကာသိမ်းပိုက်ခြင်းဖြင့် ဇာတ်သိမ်းခဲ့ရသည်။